केचारा फरेस्ट रिट्रीटमा आफ्नो कर्म कसरी शुद्धिकरण गर्ने | Tsem Rinpoche
Ask A Question 2480
Feb 5, 2019 | Views: 771
(Click here to read the original English article.)
संसारभरका प्यारा साथीहरु,
मेरा विद्यार्थीहरुमध्ये एक, केन्ट कोक, मुटुको रोगका कारण अस्वस्थ छन् । उनी उपचारको प्रक्रियामा छन् र म उनको बारेमा निकै चिन्तित छु । त्यसकारण मैले उनलाई स्वस्थ हुन र निको हुन केचारा फरेस्ट रिट्रीटस्थित डुक्कर अपार्टमेन्टमा केहि हप्ता बस्न आमन्त्रण गरे ताकि उनी धर्म साथीहरुका माझ रहुन् र एक्लै नहुन् ।
हालै मैले उनलाई डुक्कर अपार्टमेन्टमा घुमिरहेको देखेँ र यसकारण म शुद्धिकरण अभ्यासबारे कुरा गर्न प्रेरित भए जुन उनी र अन्य सबैले केचारा फरेस्ट रिट्रीटमा गर्न सक्छन् । यो अभ्यास मेरो मनपर्ने शुद्धिकरण अभ्यास, ३५ कबुल (कबुल) बुद्धहरुमा आधारित छ, जसलाई न्यिंग्मा, काग्यु, साक्य र गेलुग सबै सम्प्रदायहरुले अभ्यास गर्छन् । यो अभ्यास हाम्रो शरीरका रोग निको पार्न, आयु लम्ब्याउन, बाधाहरु हटाउन र हाम्रो मनमा राम्रो गुणहरु विकास गर्नको लागि उपयुक्त छ ।
केन्ट कोकको निकै गम्भीर उपचार पद्धति थियो तर उनी निकै बलियो र गुणवान छन् र उनी बचे । उनी निकै राम्रो मान्छे हुन् । उनी धेरै बोल्दैनन् तर धेरै कार्यहरु गर्छन् र सधै मद्दत गर्न तत्पर हुन्छन् । साथै उनमा जटिलता छैन र उनको दयालु मन छ । र यस शुद्धिकरण अभ्यासले उनलाई र यहाँ केएफआरमा भएका र भविष्यमा जहाँसुकै हुने अन्य धेरै मानिसहरुलाई मद्दत गर्नेछ । यो विशेषरुपमा लाभदायक तब हुन्छ, जब यसको अभ्यास केचारा फरेस्ट रिट्रीटमा धेरै उच्च आशिषप्राप्त बुद्ध मुर्तिहरु र वज्रयोगिनी स्तुपाको अगाडि गरिन्छ ।
शुद्धिकरण अभ्यास र त्यसमा पनि विशेषगरी ३५ कबुल बुद्धहरुको अभ्यास र आराधनाको उद्देश्य र लाभहरुबारे मेरो विचारको अनुलिपि यस अभ्यासमा सामेल हुन चाहनेहरुको लागि थप जानकारीको साथ यहाँ तल उपलब्ध छ । म यसलाई चाडै चिनियाँ, नेपाली र तिब्बती भाषामा पनि उपलब्ध गराउने छु किनकि धेरै तिब्बती मानिसहरुले यसलाई बुझ्दैनन् ।
म विनम्रतापुर्वक सबैलाई यो शिक्षा अरुसँग खुशीसाथ उत्साहपूर्वक र अथकरुपमा साझा गर्न र अरुलाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दछु किनकि हामीले यसबाट कसैलाई मद्दत गर्न सक्नेछौँ । उनीहरुले यो अभ्यास गर्न चाहन्छन् वा चाहदैनन्, त्यो उनीहरुमा निर्भर गर्छ तर हरेक दिन अरुलाई लाभ दिनु हाम्रो लागि राम्रो जीवन जिउने मार्ग हुनेछ ।
अनुलिपि: केचारा फरेस्ट रिट्रीटमा आफ्नो कर्म कसरी शुद्धिकरण गर्ने
कर्म आत्मकेन्द्रित मनबाट उत्पन्न हुन्छ । आत्मकेन्द्रित मन त्यस्तो मन हो, जसले सबै चिजहरु आफुसँग सम्बन्धित रहेको, आफु सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको र अरु कसैको महत्व नभएको ठान्दछ । मेरो जीवन, मेरो पानी, मेरो खुशी, म, म, म, म, म, म, म । यसरी यसप्रकारको मन जसले आफु केहि नगरी बसे पनि सधै आफ्नोबारेमा मात्र सोच्छ, आफुमा, आफ्नो लागि र आफ्नो बारेमा केन्द्रित रहन्छ, त्यस्तो मनले नकारात्मक कर्म बटुल्छ ।
त्यसकारण यदि कसैसँग स्वार्थी मन छ भने उनीहरुले केहि नगरेपनि, केहि नखाएपनि, केहि चिज नमारेपनि, केहि नपढेपनि, केहि नगरेपनि, उनीहरुले नकारात्मक कर्म बटुल्छन् । नकारात्मक कर्म त्यस्तो मनले जम्मा गर्छ जसमा “म, म, म, म, म” भन्ने भावना हुन्छ । त्यसकारण यदि हामी निन्द्रामा छौँ भने त्यसको मतलब हामीले नकारात्मक कर्म जम्मा गरिरहेका छैनौ भन्ने होइन । त्यसप्रकारको मनले सधै नकारात्मक कर्म जम्मा गर्छ र त्यसप्रकारको मनले पहिले बनिसकेको नकारात्मक कर्म खोल्छ ।
त्यसप्रकारको मनले थप नकारात्मक कर्म बनाउछ र त्यसप्रकारको मन निरन्तर तीन तल्लो लोकमा वा संसारमा पुनर्जन्म लिने मुख्य कारण बन्छ । त्यसकारण त्यसप्रकारको मन, हाम्रो मुक्तिको नभई निरन्तर संसारमा जन्म हुने मुख्य कारक हुनेछ, र जब त्यो मन बलियो हुन्छ, हाम्रो केवल संसारमा पुनर्जन्म मात्र नभई हामी यस संसारमा पहिले धेरै पटक आएपनि हामीले संसारलाई विशाल आनन्द, विशाल खुशी, विशाल सुन्दरता र विशाल कल्पनाको स्थानको रुपमा देख्नेछौँ ।
तपाईं गोल्डफिस जस्तै हुनुहुन्छ । यो भनिन्छ कि पानीको भाडामा (एक्व्यरिएम्) गोल्डफिसलाई कहिल्यै अल्छीपना महसुस हुँदैन । म निश्चित त छैन तर यो भनिन्छ कि गोल्डफिसको स्मरणशक्ति केवल दुई वा तीन सेकेण्डको हुन्छ । त्यसकारण जब गोल्डफिस भाडाको एक कुनाबाट फर्केर एक दुई सेकेण्डमा अर्को कुनामा जान्छ, उसलाई त्यो नयाँ ठाउँ लाग्छ किनकि उसले त्यो ठाउँ भुलिसकेको हुन्छ । र त्यसपछि त्यो फर्केर पुरानो ठाउँमा जान्छ र त्यसलाई नयाँ ठाउँ भनि सोच्छ । त्यसकारण हेर्दा गोल्डफिस राख्ने भाँडा धेरै सानो भएपनि गोल्डफिसलाई कहिल्यै पनि अल्छीपना महसुस हुँदैन किनकी उनीहरुको निकै छोटो समयको स्मरणशक्ति हुन्छ ।
त्यसैगरी हामीमध्ये केहि यस संसारबाट दिक्दार हुँदैनौँ किनकि हाम्रो स्मरणशक्ति धेरै छोटो छ । त्यसैले हामी संसारको सबै ठाउँ गएतापनि, हामीले सबै चिज खाएतापनि, हामी सबै ठाउँमा भएको भएतापनि, सबैसँग मिलेतापनि, सबै कुरा गरेतापनि, हामीसँग सबै चिज भएतापनि, यस संसारमा गर्नपर्ने सबै कुरा गरेतापनि- र सम्भवतः धेरै पटक गरेतापनि- हामीले केहि सम्झदैनौँ । त्यसकारण हामीले सोच्छौँ कि यो कुनै नयाँ कुरा हो, “ए म जवान छु, मैले आनद लिनुपर्छ । ए, म बुढो छु, मैले आनन्द लिनुपर्छ । ए, म स्वतन्त्र छु, मैले आनन्द लिनुपर्छ । ए, म बिरामी छु, मैले आनन्द लिनुपर्छ ।” हामी सधै यसरी सोच्छौँ किनकि हामी भाँडाको गोल्डफिस जस्तै हौँ ।
त्यसैले त्यस प्रकारको मनले कर्म उत्पन्न गर्दछ, जसले केहि न केहि समस्या ल्याउँछ । किन? किनकि यदि हामी दलदलको बिचमा पाइला टेक्छौँ, यदि फोहोरको बिचमा पाइला टेक्छौँ, यदि जंगलको बिचमा पाइला टेक्छौँ, सडकको मध्ये भागमा पाइला टेक्छौँ भने त्यसले समस्या निम्त्याउँछ । यदि हामी जंगलमा छौँ र असुरक्षित छौँ भने हामीलाई लाइम रोग लाग्न सक्छ, हामीलाई जाडो लाग्न सक्छ, हामीलाई केहिले टोक्न सक्छ । यदि हामी सडकको बिचमा छौँ भने, हामीलाई गाडीले किच्न सक्छ । मेरो मतलब यदि हामी बिच भागमा बस्छौ भने यी खतरनाक स्थानहरु हुन् । संसार यस्तो छ कि जस्तै यदि हामी भूकम्प नआउने, कुनै प्राकृतिक प्रकोप नआउने, आँधीबेहरी नआउने संसारको सबैभन्दा सुरक्षित ठाँउ, सानो गाउँमा जन्मे पनि हामी बिरामी हुनेछौँ, हामी बुढा हुनेछौँ, हामीले आफ्नो मनपर्ने साथी पनि गुमाउनेछौँ, हामी निराश पनि हुनेछौँ, हामीहरुलाई मानिसहरुले धोका दिनेछन्, हामीसँग विश्वास गर्न नसकिने मानिसहरु हुनेछन् र हामीसँग अपुरा सपनाहरु पनि हुनेछन् । यी सबै हाम्रो आत्मकेन्द्रित मनको कारण हुनेछन् ।
त्यसकारण तपाईं जब जीवनचक्रमा हुनुहुनेछ, तपाईंले कर्म उत्पन्न गर्नुहुनेछ । यसबाट बच्ने कुनै उपाय छैन । रहस्यको कुरा यो हो कि, तपाईंले कति कर्म बनाउनुभयो र कति कर्म खोल्नुभयो । त्यसकारण जब हामीसँग आत्मकेन्द्रित मन हुन्छ, हामीले कर्म खोल्छौँ । तपाईंलाई थाहा छ किन? किनकि हामीले सबैचिज, सबै स्थिति, सबै मानिस, सबै परिस्थिति हाम्रो आत्मकेन्द्रित भावबाट हेर्छौँ । मानौ कि यदि कोहि स्वार्थी व्यक्तिले शारोनलाई देख्यो भने, उनीहरुले “ ए, मैले उनीबाट कति पैसा लिन सक्छु”, उनीबाट मैले के प्राप्त गर्न सक्छु?, उसले मेरो कसरी मद्दत गर्न सक्छ? ए, उनले मेरो मद्दत गर्न सक्दिनन् , म उनको साथी बन्न पर्दैन । मलाई ऊ चाहिँदैन, खाली शायद पछि उनले केहि कुरामा मेरो मद्दत गर्न सक्छिन् भनेर म उनीसँग मित्रता गर्छु । “ भनेर सोच्छन् । त्यसकारण यदि तपाईंसँग आत्मकेन्द्रित मन छ, र खाली म म भनेर मात्र सोच्नुहुन्छ भने, जब तपाईंले शारोन देख्नुहुन्छ, तपाईंले सधै “मैले कसरी उनलाई उपयोग गर्न सक्छु?” भनेर सोच्नुहुन्छ ।
मानौं, मेरो आत्मकेन्द्रित मन त्यति बलियो र जीवित छैन । त्यसपछि जब मैले शारोनलाई हेर्छु तब मैले “ ए शायद उनी राम्री महिला हुन् । शायद मैले उनीसँग मित्रता गर्नुपर्छ । शायद हामी बाहिर कहिलेकाहिँ खाना खानुपर्छ । शायद हामीले कुरा गर्नुपर्छ । शायद हाम्रो शौख एउटै हुनसक्छ, शायद हामी चित्रकला गर्नसक्छौँ, केहि संगीत सुन्न सक्छौँ । शायद उनीसँग अरु साथीहरु छन्, जोसँग उनले मेरो परिचय गर्न सक्छिन् । मसँग साथीहरु छन् जसलाई मैले उनीसँग परिचय गराउन सक्छु । हामी साथी हुनेछौँ ।” भनेर सोच्छु ।
यसरी तपाईंले उनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो तपाईंको मनको स्थिति हो । र त्यसकारण आफ्नो स्वार्थ हेर्ने व्यक्ति, जसको आफुलाई महत्व दिने बानी बलियो हुन्छ, उनीहरुको सबै कुराहरु गलत हुन्छ। उनीहरु वरिपरिका सबै कुराहरु गलत हुन्छन् । उनीहरुले भेटका सबै चिज गलत हुनेछन्, सबैचिज सधै गलत हुनेछ र सबैजना सधै गलत हुनेछन् । र उनीहरु भने चाहिँ सहि हुनेछन् । यदि सबैजना गलत छन् र तपाईं सहि हुनुहुन्छ भने त्यो अत्यन्त बलियो स्वार्थी, आत्मकेन्द्रित मनको स्पष्ट संकेत हो । किन? किनकि तपाईं सबैकुरा आफ्नो फाइदाको लागि हेर्नुहुन्छ । यदि यसबाट तपाईंको फाइदा छैन भने त्यो राम्रो होइन । यो सरल कुरा हो ।
त्यसकारण जब यो कर्म संचित हुन्छ र यो शरीरबाट भएको हो भने शरीरको कर्म फर्कनेछ । यदि यो मनबाट भएको हो भने मनको कर्म फर्किनेछ । यदि यो बोलीबाट भएको हो भने बोलीको कर्म फर्किनेछ । यदि हामी बोलीको कर्म उत्पन्न गर्छौँ वा बोली कर्म खोल्छौँ भने यसले हाम्रो मन र शरीरलाई असर गर्नेछ । यदि हामी शरीर कर्म खोल्छौँ भने यसले हाम्रो बोली र मनलाई असर गर्नेछ । यदि हामी मन कर्म खोल्छौँ वा उत्पन्न गर्छौँ भने हामीले हाम्रो नकारात्मक मन कर्म हाम्रो नकारात्मक बोलीबाट व्यक्त गर्छौँ । त्यसकारण यदि हाम्रो नकारात्मक मन हुन्छ भने हामीले नकारात्मक मनबाट कार्य गर्नेछौँ, त्यसपछि हामीले मार्ने वा कुट्ने वा दुख दिने वा ठग्ने लगायतका नकारात्मक शरीरका कार्यहरु खोल्दछौँ । यसरी यदि हामीसँग नकारात्मक शरीरका कार्यहरु छन् र हामी नकारात्मक शरीर कार्यहरु गर्छौँ भने यसले हाम्रो मनलाई पनि नकारात्मक बनाई असर गर्दछ । यदि हामीले बोली कार्यहरु गर्छौं भने यसले अन्य दुईलाई असर गर्दछ । शरीर, बोली र मन – यी तीन एक अर्कासँग सम्बन्धित छन् ।
त्यसकारण जब हामी यो बारम्बार गर्छौँ, हामी हावाबाट चल्ने चक्रजस्तै हुन्छौँ । यो घुमेको घुमेकै गर्छ र हावा कहिले रोकिदैन । हाम्रो मनसँग पनि त्यस्तै हुन्छ । त्यसैले यो चक्र तोड्न अति आवश्यक छ । तर त्यो चक्र तोड्न पनि अथाह उर्जा चाहिन्छ । धर्म सिक्न हामीसँग मनको सहि स्थिति हुनुपर्छ । धर्मको अभ्यास गर्न हामीसँग मनको सहि स्थिति हुनुपर्छ । धर्म अभ्यास गर्न हामीसँग सद्गुण हुनुपर्छ । धर्म अभ्यास गर्न हामीसँग गुरु हुनुपर्छ । धर्म अभ्यास गर्न हामीसँग धर्म हुनुपर्छ । धर्म अभ्यास गर्न बुद्ध देखा पर्नुपर्छ । धर्म अभ्यास गर्न हामीसँग अभ्यासको लागि चाहिने अनुकुल वातावरण र स्थान हुनुपर्छ । धर्म अभ्यास गर्न हाम्रो जीवनमा अभ्यास गर्नबाट रोक्ने धेरै विनाशकारी कुराहरु हुनुहुन्न ।
यसरी धेरै कारकहरु आवश्यक छन् र हामीलाई धर्म अभ्यास गर्न चाहिने ती कारकहरु धेरै दुर्लभ छन् । धर्म अभ्यास गर्न र सबै कुराहरु पुरा हुन वा पूर्णता नजिक हुन निकै गाह्रो छ । हामीमध्ये धर्ममा भएकाहरुसँग यी चिजहरु लगभग पूर्ण छन् । यो प्रकारको अवसर फेरी आउँदैन । धर्मसँग भेट्नु, लामासँग भेट्नु, गुरुसँग भेट्नु, यस्तो समय जहाँ बुद्धका शिक्षाहरु अस्तित्वमा छन्, जहाँ सहयोगको लागि धर्म भाई र दिदीबहिनी छन्, जहाँ संस्था छ, स्थान छ, साथीहरु छन्- निकै नै दुर्लभ कुरा हो । यो सबै एकै स्थान आउनु एक शक्तिशाली संयोजन हो र यो तपाईंले आफ्नो पूर्वजन्ममा धर्म अभ्यास गर्न बनाएको कर्म खोलिनु हो ।
यसरी यो निरन्तर हुनको लागि हामीले धेरै सद्गुणहरु जम्मा गर्नुपर्छ र धेरै नकारात्मक कर्म शुद्धिकरण गर्नुपर्छ । नकारात्मक कर्म शुद्धिकरण गर्ने प्रक्रिया के हो? नकारात्मक कर्म शुद्धिकरण गर्ने प्रक्रिया भनेको, कर्म लुकेको हुन्छ, कर्म हुन्छ तर कर्म खुलेको हुँदैन र जब कर्म खुलेको हुँदैन तब यसलाई तपाईंले महसुस गर्नुहुन्न । त्यसकारण कर्म खोल्नुअघि नै तपाईंले यसलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ । एकपटक यो खुलेपछि तपाईंले यसको शुद्धिकरण गर्न सक्नुहुन्न । यदि तपाईंको कार दुर्घटना हुनेवाला छ तर कार दुर्घटनाको कर्म खुलेको छैन भने तपाईंको कार दुर्घटना हुँदैन । तपाईंले महँगो पैसा खर्च गर्न पर्दैन । तपाईंको शरीरलाई चोट पुग्दैन । तपाईंले आसपासका मानिसहरुलाई चोट पुर्याउनुहुन्न वा कसैलाई ठक्कर दिनुहुन्न वा कसैको सम्पत्तिलाई क्षति पुर्याउनुहुन्न । त्यसकारण कार दुर्घटनाको कर्म खोल्नुअघि नै तपाईंले शुद्धिकरण गरे, तपाईंले त्यसको अनुभूति गर्नुपर्दैन । त्यसकारण निचोड यो हो कि तपाईंले कर्म हुनुअघि यसको शुद्धिकरण गर्नुपर्छ । हामीले शरीर, बोली र मनको कार्यहरु गरेर कर्म शुद्धिकरण गर्न सक्छौँ ।
हामीले शुद्धिकरण देवीदेवता जस्तै लामो आयुका तीन बुद्धहरु- नाम्ग्यालमा, अमितायुस र श्वेत तारामा भरोसा गरेर त्यो कर्म शुद्धिकरण गर्न सक्छौँ । हामी लोमा ग्योन्माजस्ता देवीदेवातामा भरोसा गर्न सक्छौँ । लोमा ग्योन्मा निकै शक्तिशाली शुद्धिकरण गर्ने देवी हुन् । हामी उच्छुस्मा वा दोर्जे नाम्जोमजस्ता देवीदेवतामा भरोसा गर्न सक्छौँ । हामी ३५ कबुल बुद्धहरुमा भरोसा गर्न सक्छौँ । हामी विशेषगरी बुद्धका अवतरित रुप जस्तै कि वज्रसत्त्वमा भरोसा गर्न सक्छौँ । हामी शुद्धिकरण गर्ने देवीदेवता जस्तै कि कालो मन्जुश्री आदिमा भरोसा गर्न सक्छौँ । औषधी बुद्ध एक अत्यन्त शक्तिशाली शुद्धिकरण गर्ने देवता हुन्, जो धेरै धेरै नै शक्तिशाली छन् । उनले प्राकृतिक प्रकोप अनुभव गर्ने कर्म शुद्धिकरण गर्छन् । उनले मानसिक तनाव अनुभव गर्ने कर्म शुद्धिकरण गर्छन् । उनले भौतिक तनाव अनुभव गर्ने कर्म शुद्धिकरण गर्छन् । त्यसकारण औषधि बुद्ध शरणको निकै शक्तिशाली साधन हुन्।
अब, यो महत्वपूर्ण छ कि: जो मानिसले धार्मिक कार्य गर्छन्, उनीहरुले “ए, मैले धर्म गरिरहेको छु, मैले सद्गुण जम्मा गरिरहेको छु त्यसकारण मैले अरु केहि अतिरिक्त गर्नुपर्दैन” भनेर सोच्छन् । त्यो हुन सक्छ तर तपाईंको प्रेरणा सहि/पूर्ण हुनुपर्छ । तपाईंको मन सन्तुलित हुनुपर्छ र जब तपाईं आफ्नो कार्य गर्नुहुन्छ त्यो निरन्तर राम्रो प्रेरणाको स्थितिमा गर्नुपर्छ । किनभने यदि तपाईं धार्मिक कार्य गर्दै हुनुहुन्छ र सहि तरिकाले गर्नुहुन्न र तपाईंले मानिसलाई निराश पार्नुहुन्छ भने त्यो धार्मिक कार्य होइन । यदि तपाईं धार्मिक कार्य गर्दै हुनुहुन्छ र ध्यानपूर्वक सुन्नुहुन्न र गलत तरिकाले गर्नुहुन्छ भने त्यो धार्मिक कार्य होइन । यदि तपाईं धार्मिक कार्य गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईं धार्मिक कार्यमा सधै ढिलो पुग्नुहुन्छ र अरु मानिसलाई तपाईंको काममा लगाएर दुख दिनुहुन्छ भने त्यो धार्मिक कार्य होइन । यदि तपाईं धार्मिक कार्य गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईंको कार्य सहि छैन र तपाईंले आफ्नो सक्दो उर्जा त्यसमा लगाउनुभएको छैन भने त्यो धार्मिक कार्य होइन । यदि तपाईं धार्मिक कार्य गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईंको उर्जा अर्को मानिसमा लगाउनुहुन्छ र रिसका साथ कार्य गर्नुहुन्छ भने त्यो धार्मिक कार्य होइन । त्यसकारण हामीले धार्मिक कार्य गर्न र त्यसपछि त्यसलाई शुद्ध धर्म र सद्गुणको संचयको रुपमा भरोसा गर्न गाह्रो हुन्छ ।
त्यसकारण पुरक (अन्य) अभ्यासहरु गर्न महत्वपूर्ण छ । उदाहरण लागि परिक्रमा, साष्टांग प्रणाम, शुद्धिकरण अभ्यास, मन्त्र पाठ, ध्यान गर्नु, मन्दिरको सफाई गर्नु, गुरुको सेवा गर्नु, गुरुको आवासको सफाई गर्नु वा गुरुको शरीर सफा गर्नु पुरक अभ्यासहरु हुन् । हामीले रिट्रीट गर्दा आउन सक्ने सबैभन्दा शुभ सपना गुरु शरीरको सफा गरेको, उनको खुट्टा धोइदिएको, उनको कपडा धोइदिएको वा उनको घर वा कोठा वा आवास सफा गरेको वा धुलो हटाएको देख्नु हो । यो स्पष्ट रुपमा तन्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले यस्तो सपना देख्नु भनेको हाम्रो कर्म सफा भएको वा शुद्ध भएको स्पष्ट संकेत हो ।
धेरै वर्षघि जब म लद्दाखमा ध्यान बसेको थिएँ, मैले केहि सपना देखेको थिएँ । मैले यमंताकाको ध्यान गरिरहेको थिएँ, जुन धेरै लामो, ७००,००० मन्त्रहरुको थियो । यसरी मैले त्यो गरिरहेको थिएँ र यो एक दिनमा चार सत्रको हुन्थ्यो । मैले लामो यमंताका मन्त्रहरु दिनको चार सत्रमा ध्यानका साथ पाठ गर्थें । र मैले एक अत्यन्त शुभ सपना देखेँ जसमा म क्याब्जे जोंग रिन्पोछेलाई सफा गरिरहेको थिएँ, र क्याब्जे जोंग रिन्पोछे न्यू जर्सीको मेरो घरको पुजा कोठामा थिए र, म त्यहाँ थिएँ र म उनको लुगा फेरिरहेको थिएँ र उनको भित्री लुगा फेरिरहेको थिएँ र मैले उनको शरीर नुहाईदिने र उनको शरीर सफा गर्ने र कपडा लगाइदिने सौभाग्य पाएँ । मैले त्यस्तो सपना देखेँ ।
मेरो मुल गुरु क्याब्जे जोंग रिन्पोछे र म
त्यस समय मैले थाहा पाइन कि त्यो शुभ संकेत थियो । मैले मेरो अभ्यास र त्यस समय आफ्नो घरमा रिट्रीटको प्रायोजन गरिरहेका उच्च लामालाई यसबारे भनें । र उनले मलाई “ए, त्यो निकै शुभ सपना हो ” भनेर भने । मैले “त्यो कसरी?” भनेर सोधेँ । “उनले भने, “किनकि सपनामा देखेको लामा सम्बन्धि जे सुकै धोएको, सफा गरेको एकदमै शुभ संकेत हो । तपाईंको लामामा मैला छैन तर तपाईंको लामा तपाईंको लागि बुद्ध भएका कारण उनलाई सफा गर्नु, उनको आवासलाई सफा गर्नु वा उनको शरीरलाई सफा गर्नुले तपाईंले आफ्नो मन सफा गरेको जनाउँछ ।” त्यसबेला मैले थाहा पाएँ कि, “यो त धेरै राम्रो हो ।” मलाई यस्तो सपनाको बारेमा थाहा थिएन । त्यसैले जब मैले त्यो सपना देखेँ, मैले सोधेँ र त्यो कुरा मलाई भनियो । त्यसैले मैले तपाईंलाई त्यो कुरा भनिरहेको छु, जुन मलाई ती रिन्पोछेले बताएका थिए ।
त्यसकारण धेरै धेरै प्रकारका अभ्यासहरु छन् । सबैभन्दा शक्तिशाली शुद्धिकरण अभ्यास, जुन हामी यस समय गर्न सक्दैनौं, त्यो शुन्यताको ध्यान हो । त्यसैले यदि हामीले शुन्यता खासगरी नागार्जुनको दृष्टिको अध्ययन गर्यौं वा हामीले लामरिम चेन्मोमा परम पावन क्याब्जे फबोंखा दोर्जे च्यांगले दिएको शुन्यता सम्बन्धि शिक्षाको अध्ययन गर्यौं, शुन्यता बारे केहि थोरै अध्ययन गर्यौं र हामीलाई राम्रोसँग थाहा भए पनि नभएपनि हामीले ध्यान गर्यौं र हामीले सम्मान गर्यौं र यसबारे सोच्यौं भने त्यसले पनि निकै शुद्धिकरण गर्नेछ ।
नागार्जुनको थान्का । माथिल्लो दायाँ भागमा मन्जुश्री हुनुहन्छ र तल्लो दायाँ भागमा दोर्जे शुग्देन । ठुलो आकारमा हेर्न क्लिक गर्नुहोस् वा हाई रिजोलुसनमा बुद्धका तस्विरहरुको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
किन? शुन्यता र शुन्यता सम्बन्धि शिक्षा आत्मकेन्द्रित मनको सिधा प्रतिवाद हो । किनकि यो यसको सिधा प्रतिवाद हो त्यसकारण यसले तपाईंको नकारात्मक कर्मको श्रोतलाई रोक्दछ । यो आगोमा पानी हाल्नु जस्तै हो । जब तपाईं आगोमा पानी हाल्नुहुन्छ, तपाईं जे चिज बलिरहेको छ, त्यसको श्रोतमा पानी हालिरहनु भएको हुन्छ । मानौ कि तपाईंको कतै टेन्ट (पाल) छ, जुन बलिरहेको छ र टेन्टको आगोको ज्वाला बलिरहेको छ र त्यसले आसपासको पातहरु बलिरहेको छ र तपाईंले ती पातहरुमा पानी हाल्नुहुन्छ भने त्यसले तपाईंलाई मद्दत गर्दैन, तपाईंले पानी सिधा आगोमा हाल्नुपर्छ ।
शुन्यतामा ध्यान वा शुन्यताको अध्ययन वा शुन्यताको अभ्यास वा शुन्यता पढ्नु धेरै शक्तिशाली शुद्दिकरण हो । र म तपाईंलाई बताउन चाहन्छु, जसले चिनियाँ भाषामा पढाई गर्नुभएको छ, उहाँहरुको लागि चिनियाँ भाषामा सुन्दर किताबहरु छन्, जुन शुन्यतामा नागार्जुनको दृष्टिको अनुवाद हो । त्यो तपाईंले लिनुपर्छ र पढ्नुपर्छ र म तपाईंलाई यो भनिदिउँ कि जब तपाईंले त्यो पढ्नुहुन्छ तपाईं आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ किनकि तपाईंले केहि पनि बुझ्नुहुने छैन तर त्यहि नै मुख्य कुरा हो । मुख्य कुरा यो हो कि तपाईंले पढेको केहि पनि बुझ्नुहुने छैन । त्यसैले तपाईंले यसलाई बारम्बार पढ्नुपर्छ र सद्गुण जम्मा गर्दै जाँदा तपाईंले त्यसलाई बुझ्नुहुनेछ ।
गुम्बाहरुमा, शुन्यता (उमा) कक्षाको अन्तिम शिक्षा हो, जुन तपाईंले अध्ययन गर्नुहुनेछ । हामीमध्ये केहि भाग्यशाली व्यक्तिहरुले यो शिक्षा छ, सात, आठ वर्ष अघि नै अध्ययन गर्न सक्छौँ । हामी यसको अध्ययन गर्न सक्षम भयौँ भने यससम्बन्धि अन्य शिक्षा पनि प्राप्त गर्न सक्नेछौँ । तर परम्परागत रुपमा यो अन्तिम कक्षामा दिइने शिक्षा हो, र त्यसबेलासम्म तपाईं २५ वा ३० वर्षको भइसकेको हुनुहुनेछ । तपाईंले शुन्यताको शिक्षा पढ्नुअघि, उदाहरणको लागि मानौं यो वर्ष तपाईंले अन्तिम कक्षा पुरा गर्नुभयो र अर्को वर्ष तपाईं शुन्यताको शिक्षामा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भने यो वर्ष धेरै भिक्षुहरु १००,००० साष्टांग प्रणाम गर्न बोधगया जानेछन् । धेरै भिक्षुहरु वज्रसत्वको ध्यान गर्न बोधगया जानेछन् । उनीहरुले यमंताकाको ध्यान गर्नेछन् वा धेरै साष्टांग प्रणाम गर्नेछन् । उनीहरुले धेरै ध्यान गर्नेछन्, उनीहरुले गुम्बामा धेरै ध्यान वा परिक्रमा गर्नेछन् ।
त्यो किन? उमा कक्षाको तयारीको लागि । किनकि उदाहरणको लागि जब तपाईं तल्लो कक्षाबाट शुरुवात गर्नुहुन्छ, त्यहाँ प्रति कक्षा ५०-६० भिक्षु हुन्छन् । यी भिक्षुहरु हरेक साल पढ्छन् र जब उनीहरु उमा कक्षामा पुग्छन्, त्यहाँ शायद चार वा पाँच भिक्षुहरु हुन्छन् । केहिले त्याग्छन् र छाड्छन्, केहिले आफ्नो पढाई जारी राख्न सक्दैनन् र बिरामी हुन्छन् । केहिले पढ्न सक्दैनन् र बुझ्न सक्दैनन् । केहि अरु कार्यमा लाग्छन् । केहि विचलित हुन्छन् । त्यहाँसम्म पुग्न नसक्नुको पछाडि धेरै कारणहरु छन् । त्यसैले धेरै भिक्षुहरु त्यस कक्षासम्म पग्न सक्दैनन् र उच्च लामाहरु जस्तै कि मेरो गुरु केन्सुर रिन्पोछेले मलाई एक समय भन्नुभएको थियो कि, उमा कक्षा वा शुन्यताको शिक्षाको कक्षासम्म चाहिने सद्गुणहरु उच्च छ र यदि हामीले तयारी गरेनौँ भने हामी सफल हुँदैनौँ ।
धेरै भिक्षुहरु छन्, जो पछि गएर विद्वान वा गुरु वा महान् शिक्षकहरु हुँदैनन् तरपनि उनीहरु धेरै राम्रा भिक्षुहरु हुन् । उनीहरु अझै पनि धेरै दयालु, सज्जन, सहयोगी र सुन्दर मानिसहरु हुन्छन् । खाली यति मात्र हो कि उनीहरुले ती शिक्षाहरु गहन रुपमा अभ्यास गर्न सकेका छैनन् किनकि सद्गुण पुगेको छैन । त्यसकारण यदि ती भिक्षुहरु जसले पवित्र जीवन बाँचेका छन्, नकारात्मक कर्मबाट सम्भव भएसम्म मुक्त छन्, उनीहरुलाई त अझै पनि उमा वा शुन्यता अध्ययन र अभ्यास गर्न थप सद्गुण चाहिन्छ भने हाम्रो कल्पना गरौँ त? हाम्रो लागि त अझै कठिन छ । यो भनिन्छ कि, शुन्यतालाई सुन्नु, शुन्यताबारे जान्नु, शुन्यताको प्रशंसा गर्नु, शुन्यताको लागि प्रार्थना गर्नु, वा शुन्यतालाई बुझ्नु तातो मरुभूमिको बिचमा वर्षा हुनुझैँ हो । यसले सबै शितल बनाउँछ । तातो मरुभूमि हाम्रो मन हो, तातो मरुभूमि हाम्रो आकांक्षा हो । त्यो हाम्रो क्रोध हो । हाम्रो कर्म हो । शितल वर्षा शुन्यताजस्तै हो, जसले मुक्ति र राहत दिन्छ ।
त्यसकारण अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा यो छ कि – हामीसँग धर्म केन्द्र भएको कारण, हामीले यति धेरै पैसा, समय र मिहेनत खर्च गरेको कारण, हामीले धर्म केन्द्र बनाउन धेरै उर्जा लगाएको कारण र अभ्यासको लागि सुन्दर स्थान भएको कारण हामीले यसको उपयोग गर्नुपर्छ र एक दिन पनि खेर फ्याल्नु हुँदैन । मैले हाम्रो केचारा फरेस्ट रिट्रीटमा निवास गर्ने, यहाँ काम गर्ने र थप शारीरिक अभ्यासमा लाग्न जानेको संख्यामा वृद्धि देखेको छु र यसबारेमा निकै खुशी छु । मैले परिक्रमाको लागि धेरै मान्छे गएको देखेको छु । परिक्रमामा जाने म नियमित रुपमा देख्दैछु, आकल-झुक्कल होइन । मैले धेरै बत्ति अर्पण गरेको र सफाई गरेको देख्दै छु । यो अति राम्रो कुरा हो ।
केचारा फरेस्ट रिट्रीटमा हरित तारालाई बत्ति अर्पण गर्दै ।
केचारा फरेस्ट रिट्रीटमा हामी प्रत्येकले वास्तवमा एक स्थान, एक देव वा देवी छनौट गर्नुपर्छ । जस्तै कि तारा, लोमा ग्योमा, १८ हात भएका रौद्र मन्जुश्री, दुई हात भएका स्वप्न मन्जुश्री, चार हात भएका मन्जुश्री वा नागेश्वराजा । हामीले बुद्ध, वज्रयोगिनी स्तुपा, चोंखापा आदिलाई छान्नुपर्छ र त्यसलाई हाम्रो विशेष साधना बनाउनुपर्छ ताकी स्थान सफा होस् । यो “किन यसलाई हामी सफा राखि नराख्ने र सर्वसाधारणको लागि यो त सफा र सुन्दर छ।” भन्ने कल्पोकल्पित कुरा होइन ।यो हाम्रै लागि हो ।
मैले पहिले पनि भनेको थिएँ कि, बुद्धको समयमा उनका एक शिष्य थिए जो धेरै विद्वान थिएनन् । उनी एक बुढा भिक्षु थिए । र जब यी बुढा भिक्षुले आफ्नो पहिलो शब्द कण्ठ पारे र उनले दोश्रो शब्द पाए, उनले पहिलो शब्द भुले । जब उनी पहिलो शब्दमा फर्के, उनले दोश्रो शब्द भुले । र यसरी अगाडि-पछाडि गर्न थाले । उनी निकै निराश भए र बुद्धलाई उनले के गर्न सक्छन् भनेर सोधे किनकि उनको धेरै नै कमजोर स्मरण शक्तिको कारण उनलाई पढेको सम्झन र धर्म बुझ्न गाह्रो भइरहेको थियो । र यसपछि बुद्धले भने, मन्दिर, भिक्षुका जुत्ता, भुइँ, वरिपरिको ठाउँ, बगैंचा, रुखलाई आफ्नो मनको रुपमा कल्पना गर । र सबै झरेको पातहरुलाई तिम्रो कर्म, कलेश, बाधाको रुपमा कल्पना गर । सबै धुलोलाई तिम्रो कलेश, तिम्रो बाधा, र नकारात्मक कर्मको रुपमा कल्पना गर र त्यसलाई दैनिक सफा गरेको कल्पना गर । मन्त्र, डु पुंग ड्री मा पुंग, डु पुंग ड्री मा पुंग, डु पुंग ड्री मा पुंग को पाठ गर । मेरो अशुद्धता हटाउनुहोस्, फोहोर हटाउनुहोस्, मेरो अशुद्धता हटाउनुहोस्, फोहोर हटाउनुहोस्, दाग.. यस मन्त्रको ध्यानपूर्वक दैनिक पाठ गर र ध्यानपूर्वक कल्पना गर ।
र ती भिक्षुले बुद्धले भने जस्तै गरे । अरु भिक्षुहरु शिक्षाको लागि गए । अन्य भिक्षुहरु कक्षा गए । केहि भिक्षुहरु स्वयम् बुद्धसँग शिक्षा लिन गए । केहि मन्जुश्रीजस्ता अर्हत र उच्च शिष्यहरुसँग गए । र सबैजना व्यस्त भए तर उनी केवल मन्दिर सफा गर्थे । उनले भिक्षु बस्ने ठाउँ सफा गर्थे । उनले भान्सा सफा गर्थे र भिक्षुका जुत्ता सफा गर्थे । त्यसमध्ये केहि जुत्ता ती भिक्षुहरुका थिए, जो अर्हतहरु थिए, जो पहिले नै उच्च सिद्धि प्राप्त थिए । त्यसकारण उनीहरुको जुत्ता सफा गर्नु धेरै मात्रामा सद्गुण पाउनु हो । उनले ती स्थानहरु सफा गर्थे, जहाँ बुद्धले शिक्षा दिन्थे र हिंड्थे । बुद्धले बाटिका वा बगैंचामा हिँड्नुअघि उनले त्यहाँ सफा गर्थे र उनले बुद्धले भनेझैँ कल्पना गर्थे र मन्त्र पढ्थे । र त्यस जीवनकालमा उनी अर्हत बन्न सक्षम भए ।
अर्हत हुनु भनेको के हो? एक अर्हत ती व्यक्ति हुन्, जो संसारमा एकपटक, वा दुईपटक वा तीनपटक आउँछन्, त्यसपछि उनीहरु संसारमा फर्कदैनन् । उनीहरुको कर्म शक्तिहीन हुनेछ । यसरी उनले शुद्धिकरणको अभ्यासबाट आफ्नो जीवनकालमा अर्हत, लोहन, पाउन सफल भए । यसरी उनलाई शुद्धिकरण अभ्यास स्वयम् भगवान बुद्धले सिकाएका थिए । यो कांगयुरमा पनि उल्लेखित छ, जुन भगवान बुद्धको शिक्षाको मौखिक ग्रन्थ हो । यो हामीलाई धेशे सुल्तिम ग्याल्छेनले लस एन्जल्समा बताउनुभएको थियो ।
त्यसकारण शुद्धिकरणको शक्ति अद्भुत छ भनेर बुझ्नुहोस् । हामीसँग बुद्धको शरीर दर्शाउने वस्तुहरु छ । हामीसँग बुद्धको बोली दर्शाउने वस्तुहरु छ । हामीसँग बुद्धको मन दर्शाउने वस्तुहरु छ । हामी बुद्धको शरीर, बोली र मन दर्शाउने वस्तुहरुबाट वरिपरी घेरिएका छौँ । त्यसैले पर्यटकजस्तै बनेर आएर यसलाई हेरेर “अहो, कति राम्रो” भन्नुको सट्टा हामीले गम्भीर अभ्यास गर्नुपर्छ । यदि हामी जवान छौँ भने हामीले गम्भीर अभ्यास गर्नुपर्छ किनकी हामी बुढेसकालसम्म बाच्छौँ कि बाच्दैनौ भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन । यदि हामी बृद्ध छौँ भने हामीले गम्भीर अभ्यास गर्नुपर्छ किनकि हामीलाई अब कति समय बाँकी छ भनेर थाहा छैन । यदि हामी बिरामी छौँ भने हामीले गम्भीर अभ्यास गर्नुपर्छ किनकि यो हाम्रो शरीर गलिरहेको छ भन्ने संकेत हो । यदि हामी स्वस्थ छौँ भने हामीले गम्भीर अभ्यास गर्नुपर्छ किनकि हामी कहिले गम्भीर बिरामी हुन्छौँ भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन । हामी चाहे पुरुष हौँ वा महिला, अग्ला छौँ वा होचा , काला छौँ वा गोरा, हामीले गम्भीर अभ्यास गर्नुपर्छ । हामी सबैले गम्भीर अभ्यास गर्नुपर्छ किनकि हामीहरु सबै संसारिक प्राणीको श्रेणीमा पर्छौं । संसारिक प्राणीहरु कर्मको कारण अस्तित्वमा रहेका हुन्छन् र त्यो आत्मकेन्द्रित मनबाट आउँछ ।
त्यसकारण हाम्रो कर्म शुद्धिकरण गर्न यी अभ्यासहरु महत्वपूर्ण छन् र यसलाई हल्का रुपमा लिईनुहुँदैन । हामीले गर्नसक्ने धेरै अभ्यासहरु छन् । सबैभन्दा प्रभावकारी र मलाई मनपर्ने अभ्यासहरुमध्ये एक ३५ कबुल बुद्धहरु हुन् । ३५ कबुल बुद्धहरुको नाम कण्ठ गर्न तपाईंहरुमध्ये केहीलाई एक हप्ता लाग्छ, केहीलाई एक महिना लाग्छ, केहीलाई दुई महिना लाग्छ । त्यसले फरक पार्दैन । उनीहरुको प्रार्थना पाठ गर्नु राम्रो हो । यदि तपाईंले कण्ठ गरेर गर्नुहुन्छ भने पनि ठिक छ । र प्रत्येक नामहरुसँग साष्टांग प्रणाम गर्नुहोस् । उनीहरुको सुत्र शुरुदेखि पाठ गर्नुहोस् र जब तपाईंले पहिलो नामबाट शुरु गर्नुहुन्छ, जुन शाक्यमुनि बुद्ध हो र उनको नाम पाठ गर्दा साष्टांग प्रणाम गर्नुहोस् । त्यसपछि तपाईं उठ्नुहोस र दोश्रो नाम लिनुहोस्, साष्टांग प्रणाम गर्नुहोस । तेश्रो नाम लिनुहोस्, साष्टांग प्रणाम गर्नुहोस् । चौथौ नाम लिनुहोस्, साष्टांग प्रणाम गर्नुहोस् । पाँचौ नाम लिनुहोस्, साष्टांग प्रणाम गर्नुहोस् ।
केचारा फरेस्ट रिट्रीटमा बुद्ध नागेश्वराजा
यदि तपाईंले ३५ कबुल बुद्धहरुको अभ्यास गर्नुहुन्छ भने तपाईं नागेश्वराजालाई साष्टांग प्रणाम गर्न सक्नुहुन्छ, जो ३५ कबुल बुद्धहरुमध्ये एक हुन् । तपाईं वज्रयोगिनी स्तुपालाई साष्टांग प्रणाम गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईं मन्जुश्रीलाई साष्टांग प्रणाम गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईं तारालाई साष्टांग प्रणाम गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईं लोमा ग्योंमालाई साष्टांग प्रणाम गर्न सक्नुहुन्छ । जबसम्म तपाईं बुद्धलाई साष्टांग प्रणाम गर्नुहुन्छ, तपाईंले तीमध्ये कसलाई प्रणाम गर्नुभयो त्यसले फरक पार्दैन । यहाँसम्म कि एक धर्मग्रन्थ, गुरुको फोटो, संघ वा आर्य संघ भए पनि हुन्छ । यसरी हामीले यो पाठ गर्दा साष्टांग प्रणाम गर्न सक्छौँ । के साष्टांग प्रणाम गर्दा तपाईंले ३५ कबुल बौद्ध अगाडि गर्नुपर्छ ? पर्दैन, किनकि उनीहरुको नामको पाठ गर्दा र उनीहरुको बारे सोच्दा तपाईंले कर्म शुद्धिकरण गरिरहेको हुनुहुन्छ ।
त्यसकारण यदि हामीले दैनिक ३५ कबुल बुद्ध साधना गर्यौं भने यो निकै शक्तिशाली हुनेछ । यदि हामीलाई कण्ठ गर्न गाह्रो भयो वा साष्टांग प्रणाम गरि यो गर्दा गाह्रो भयो वा हाम्रो शाररिक अशक्तता, शरीर भारी भएको कारण वा मुटु रोगको कारण वा अन्य कुनै अवस्थाको कारण साष्टांग प्रणाम गर्न गाह्रो भयो भने पनि कमसेकम हामी आफ्नो कुर्सीमा पाठ गर्न सक्छौँ । ३५ कबुल बुद्धहरुको पाठ गर्नु निकै नै शक्तिशाली हुनेछ । सबभन्दा पहिले हामीले शरण लिनुपर्छ । शरण लिएपछि हामीले सधै चार असिमितहरु पाठ गर्नुपर्छ किनकि हामीले त्यहि हासिल गर्न चाहन्छौँ अर्थात् सन्तुलन । चार असिमितहरु गरेपछि विचार रुपान्तरणको आठ श्लोकको पाठ गर्नु शक्तिशाली हुन्छ, जुन सबैभन्दा शक्तिशाली, सबैभन्दा सुन्दर, सबैभन्दा प्रभावकारी शिक्षा हो, जुन हामीले क्रोध र आत्मकेन्द्रित मनलाई प्रतिवाद गर्न संसारमा अनुभूति गर्न चाहन्छौँ । र हामीले यो सोच्न सक्छौँ कि हामी केवल यसलाई पढिरहेका छौँ । यसलाई प्रयोगमा ल्याएका छैनौ तर यसलाई पढ्नु पनि यसलाई अन्ततः प्रयोगमा ल्याउनु हो किनकि हामीले एकप्रकारले बिउ रोपिरहेका हुन्छौँ ।
३५ कबुल बुद्धहरुको थान्का । ठुलो आकारमा हेर्न क्लिक गर्नुहोस् वा हाई रिजोलुसनमा बुद्धका तस्विरहरुको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
हरेक दिन विचार रुपान्तरणको आठ श्लोकको पाठ गरेपछि हामीले ३५ कबुल बुद्धहरुको साधना गर्नुपर्छ । र त्यसपछि के गर्ने तपाईंलाई थाहा छ? तपाईं परिक्रमा गर्दा वा हरेक रात धर्म पैदल यात्रामा जाँदा ३५ कबुल बुद्धहरुको पनि पाठ गर्न सक्नुहुन्छ । यो साच्चिकै सुन्दर छ । किन? परिक्रमा वा धर्मको पैदल यात्रामा जानु भनेको साष्टांग प्रणाम गर्नुझैँ हो । तपाईं बुद्धहरुलाई श्रद्धा टक्र्याउन परिक्रमा वा धर्म हिडाई गर्नुहुन्छ । तपाईं खाली बुद्धको आसपास हिंडिरहेको हुनुहुन्न । तपाईं परिक्रमा गरिरहको हुनुहुन्छ । हो, यो भारतीय परम्परा हो । भारतीयहरु जब आफ्नो गुरुहरुलाई पहिलोपटक भेट्छन् उनीहरुको गुरुहरुको परिक्रमा गर्छन् र उनीहरुको खुट्टा ढोग्छन् र धर्म प्राप्त गर्न बस्नुहुन्छ । वा जब उनीहरु मन्दिर वा मुर्तिकोमा जान्छन् उनीहरु त्यसको तीन पटक परिक्रमा गर्छन् । यो भारतीय परम्परालाई बौद्ध धर्ममा अनुशरण गरियो । बौद्ध धर्म भारतबाट आउँछ ।
त्यसकारण हामी गैर भारतीयहरुको लागि परिक्रमाको कुनै अर्थ छैन तर जब हामी परिक्रमा गर्छौँ र यो बुद्धलाई श्रद्धा अर्पण गर्ने एक तरिका हो भनेर बुझ्छौँ तब यसको अर्थ थाहा हुन्छ र यसको अर्थमा भिज्न हामी भारतीय हुनुपर्दैन । जब हामी बुद्धको वरिपरी परिक्रमा गर्छौँ हामी बुद्धको शरीर, बोली र मनलाई श्रद्धा अर्पण गरिरहेका हुन्छौँ र हामी हाम्रो शरीर, बोली र मनलाई शुद्ध बनाईरहेका हुन्छौँ । हामी परिक्रमा गरिरहेको बेला बातचित नगर्नु धेरै राम्रो हुन्छ । बरु त्यस समय ३५ कबुल बुद्धहरुको पाठ गर्नु राम्रो हुन्छ । यसको एक भाग वा केवल उनीहरुमध्ये केहीको नाम पढि अन्ततः याद गर्नाले पनि राम्रो हुन्छ । यसलाई कण्ठस्थ गर्न दिमागलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ ।
यदि तपाईंलाई सम्झन गाह्रो भए तपाईंले ३५ कबुल बुद्धहरुको पैदल यात्रामा जानुअघि पाठ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईं हिंड्दा बुद्ध शाक्यमुनिको मन्त्रको पाठ गर्न सक्नुहुन्छ । र सबै ३५ कबुल बुद्धहरु शाक्यमुनि हुन् र शाक्यमुनि उनीहरु हुन् भन्ने तपाईं कल्पना र विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसपछि तपाईं शाक्यमुनि बुद्धलाई १००% विश्वास गर्नुहोस् र मान्नुहोस् । त्यसपछि तपाईं शाक्यमुनि मन्त्र पाठ गर्नुहोस् । छोटो, लामो, मध्यम, त्यो तपाईंमा निर्भर गर्छ । त्यसपछि तपाईं पैदल यात्रामा जानुहोस् ।
बुद्ध अमिताभ, बुद्ध सामन्तभद्र, वज्रकिलय र दोर्जे शुग्देनको साथ वज्रसत्त्वको थान्का । ठुलो आकारमा हेर्न क्लिक गर्नुहोस् वा हाई रिजोलुसनमा बुद्धका तस्विरहरुको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
तपाईं वज्रसत्त्वको मन्त्रको पाठ गर्न सक्नुहुन्छ । वज्रसत्त्व सबै बुद्धहरुको उर्जा हो, जुन हाम्रो आत्मकेन्द्रित मन र आसक्त मनलाई शुद्ध बनाउन जम्मा भएको हुन्छ । तपाईंले वज्रसत्त्वको मन्त्रको पाठ गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईं तपाईंको यिदमको मन्त्र, मन्जुश्रीको मन्त्र, ताराको मन्त्र, चेनरेजिगको मन्त्र पाठ गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईं दोर्जे शुग्देनको मन्त्रको पाठ गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईं तीन बोधिसत्त्वहरुको मन्त्र एकत्रित रुप मिग्त्सेमाको पाठ गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईं त्यो पाठ गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले हरेक दिन तपाईंले कम्तिमा ३५ साष्टांग प्रणाम हासिल गर्न प्रयास गर्नुपर्छ र यो एक प्रकारको प्रणाली हुनुपर्छ । शायद तपाईंले यो गरेर नुहाउन जान सक्नुहुन्छ । तपाईंले यस प्रणालीलाई राख्नुपर्छ । किन थाहा छ? तपाईंलाई पसिना आउने नै छ र तपाईंले नुहाउनु नै पर्नेछ । तपाईं यसैपनि गनाउने हुनुहुनेछ । उपयोगी कामको लागि फोहोरी, गनाउने, च्याप च्याप लाग्दो हुनु पनि ठिकै हो । हैन? त्यसकारण तपाईंले हरेक दिन यो साधना गर्ने प्रणाली बसाल्नुहोस् । यो सकाएपछि तपाईंले समर्पण गर्नुहोस्, त्यसपछि साधारण साधना गर्नुहोस् ।
मैले अब तपाईंलाई परिक्रमा जान शुद्धिकरण अभ्यास दिँदै छु । यो तपाईंको साधना होइन । तपाईंको साधना तपाईंको साधना हो । परिक्रमा गर्दा यो अभ्यासले तपाईंलाई शुद्धिकरण गर्न अतिरिक्त शक्ति, अतिरिक्त उर्जा र अतिरिक्त जोड दिनेछ । तपाईंलाई केबाट शुद्धिकरण गर्ने? रोगहरुबाट, असामयिक निधनबाट, समयभन्दा पहिले मृत्युबाट, डरबाट, बाधाहरुबाट, क्रोधबाट र यस्ता धेरै चिजहरुबाट, जसबाट तपाईं आफुलाई शुद्ध गर्न चाहनुहुन्छ । आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्नुभएको सबै चिजको बारेमा सोच्नुहोस्, जुन सुखद थिएनन् । के तपाईं ती घटना फेरी अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ ? म चाहँदिन । त्यसैले तपाईं यहाँ भएको बेला तपाईंले “एक पवित्र स्थानमा हुन पाउँदा म कति भाग्यशाली छु” भनेर सोच्नुपर्छ ।
याद राख्नुहोस् कि केचारा फरेस्ट रिट्रीट पवित्र भएको मैले बनाएको कुरा होइन । यस स्थानलाई केन्सुर रिन्पोछेजस्ता पुराना वरिष्ठ भिक्षुहरुले आशीर्वाद दिनुभएको छ । यस स्थानलाई दोर्जे शुग्देनजस्ता धर्म रक्षकले आशीर्वाद दिनुभएको छ । यस स्थानलाई काचे मार्पोजस्ता अत्यन्त शक्तिशाली सहायकले आशीर्वाद दिनुभएको छ । त्यसकारण यो स्थान पूर्ण रुपले आशिष प्राप्त छ । सबै वस्तुहरु आशिषप्राप्त छन् त्यसैले हामी कल्पना गरिरहेका वा आफुलाई भ्रममा पारिरहेका छैनौ । यी आशिषप्राप्त छन् । यी पवित्र छन् । त्यसकारण हामीले आफुलाई भाग्यमानी ठान्नुपर्छ ।
आफ्ना दुई मुटु छोराहरुसँग भगवान चोंखापाको थान्का । ठुलो आकारमा हेर्न क्लिक गर्नुहोस् वा हाई रिजोलुसनमा बुद्धका तस्विरहरुको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
केचारा फरेस्ट रिट्रीटमा हामी सबैले एक देवता छान्नुपर्छ र ती हाम्रो विशेष सफा गर्ने शुद्धिकरण देवता हुन् । हेर्नुस्, जब तपाईं ताराको सफाई गर्न जानुहुन्छ, तारा कहिल्यै फोहोर हुनुहुनेछैन । उहाँको मुर्ति फोहोर हुन्छ किनकि तपाईंले यसलाई फोहोर भएको कल्पना गर्नुहुन्छ । तपाईंको यसलाई फोहोर भएको देख्ने कर्म छ त्यसैले शुद्धिकरण गर्नुपर्ने तपाईंको कर्म छ । यदि तपाईंको त्यस्तो कर्म छैन भने जब तपाईंले ताराको मुर्ति देख्नुहुनेछ यो सबै रुपमा ठिक हुनेछ । यो चम्किलो, हरियो र रत्नझैँ अद्भुत हुनेछ । तर तपाईं र मेरो संसारको अनुभव गर्ने कर्म छ त्यसकारण जब हामी ताराको मुर्ति हेर्छौ, हामीले यसलाई फोहोर देख्छौँ । त्यसकारण जब हामी यसलाई सफा गर्छौँ तब हामी तारालाई सफा गरिरहेका हुँदैनौँ, हामीले ताराबाट धुलो हटाइरहेका हुँदैनौँ, हामीले हाम्रो मनबाट धुलो सफा गरिरहेका हुन्छौँ जसको प्रकृति ताराको हुन्छ । हाम्रो प्रकृति बुद्धको हो । हाम्रो प्रकृति मन्जुश्री हो । हाम्रो प्रकृति नागेश्वराजा हो । हाम्रो प्रकृति चोंखापा हो । त्यसकारण जब हामी मुर्तिबाट धुलो, मैलो र पातहरु सफा गरिरहेका हुन्छौँ, तब हामीले हाम्रो मनको प्राकृतिक स्थिति, जुन हामी हुन्छौँ, त्यसलाई सफा गरिरहेका हुन्छौँ । चोंखापा, नागेश्वराजा, तारा कहिल्यै फोहोर हुन सक्नुहुन्न । त्यसकारण यो कुरा निकै शक्तिशाली हुन्छ ।
त्यसैले निश्चित रुपमा प्रत्येक दिन तपाईं परिक्रमाको लागि जानुपर्छ । र यदि तपाईं निकै थकित हुनुहुन्छ, व्यग्र हुनुहुन्छ र तपाईंले गर्नुपर्ने धेरै काम छ र केचाराको दास गुरु तपाईंलाई पाँच मिनेटभित्र केहि काम निकाल्न जोड दिइरहनुभएको छ भने तपाईंले द्रुत गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंलाई थाहा छ, हामी छिटो खाना खान्छौँ, हामीले छिटो हनिमुन मनाउछौँ, हामी छिटो विवाह गर्छौँ, छिटो सम्बन्धविच्छेद गर्छौँ, हामी सबै चिज छिटो गर्छौँ, होइन? त्यसकारण हामीसँग द्रुत शुद्धिकरण छ।
यसमा तपाईं वज्रयोगिनी स्तुपामा दौडिनुपर्छ र छिटो-छिटो परिक्रमा गर्नुपर्छ र छिटो-छिटो तीन साष्टांग प्रणाम गर्नुपर्छ । छिटो फर्कनुपर्छ र सुत्न जानुपर्छ । द्रुत गर्नुको उद्देश्य तपाईंको मनलाई एकनास बनाउन तालिम दिनु हो । केहि नहुनुभन्दा केहि भएकै बेस । र यदि तपाईंसँग घरपालुवा जनावर छन्, जसलाई तपाईंले उनीहरुलाई माया गर्नुहुन्छ भने उनीहरुलाई पनि तपाईंको साथ लानुहोस् । उनीहरुको तपाईंसँग बस्ने कर्म छ । उनीहरुको तपाईंको जीवनमा हुने कर्म छ । उनीहरुको धर्मको नजिक बस्ने कर्म छ त्यसकारण उनीहरुलाई तपाईंले परिक्रमा गर्न जाँदा लानुहोस् । यदि तपाईं उनीहरुलाई हरेक दिन लैजान सक्नुहुन्न भने उनीहरुलाई कहिलेकाँहि लानुहोस् । स्ट्रोलर किन्नुहोस्, तपाईंलाई परिक्रमा गर्न जे चाहिन्छ, त्यो किन्नुहोस् र मन्त्रहरुको पाठ गर्नुहोस् । तपाईंले उनीहरुको लागि गर्न सक्ने सबैभन्दा राम्रो कुरा यो हुनेछ ।
केचारा फरेस्ट रिट्रीटमा वज्रयोगिनी स्तुपा
त्यसकारण हरेक दिन हामीले शरण, चार असिमितहरु, ३५ कबुल बुद्धहरुको अभ्यास गर्नुपर्छ । हामीले त्यो सुत्र कतिपटक पाठ गर्नुपर्छ? यो तपाईंमा निर्भर गर्छ । यो एक सुन्दर, सहज, सलल बग्ने अद्भुत सुत्र हो । र यसमा आफ्नो नाम राख्नुहोस् । म, जसको नाम फलानो फलानो हो भनेर तपाईंको नाम राख्न सक्नुहुन्छ । यदि तपाईंले आफ्नो नाम राख्न भुल्नुभयो भयो भने, ३५ कबुल बुद्धहरुमध्ये एकले तपाईंको नाम पत्ता लगाउनेछन् । र त्यसपछि तपाईं ३५ कबुल बुद्धहरुको पाठ गर्नुहोस् र त्यसपछि समर्पण गर्नुहोस् ।
तपाईंले ३५ कबुल बुद्धहरुको पाठ गर्दा साष्टांग प्रणाम वा परिक्रमा वा बुद्धहरुमध्ये एकको सफाई गर्न सक्नुहुन्छ । यो अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ । यसरी तपाईंको शरीर, बोली र मन शुद्ध हुन्छ । र यदि तपाईंले आफ्नो सोचलाई विस्तार गर्नुभयो भने तपाईंले आफ्नो आमालाई बायाँ, बुवालाई दायाँ र तपाईंलाई सताउने, दुख दिने, चोट दिने सबै व्यक्तिहरुलाई तपाईंको अगाडि र तपाईंलाई सहयोग गर्ने र माया गर्नेहरु सबैलाई तपाईंको पछाडि कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ । र जनावर, नर्कका प्राणी, भुत, भगवान, राक्षस र आत्मासहित सबै चेतनशील प्राणीहरु मानव रुपमा हुन्छन् । किन मानव रुपमा ? केवल मानव रुपमा उनीहरु प्रबुद्ध बन्न बौद्ध धर्मको उच्चतम रुप अभ्यास गर्न सक्छन् । त्यसकारण हामीले उनीहरुलाई तपाईंसँग त्यहि गरेको कल्पना गर्छौँ । तपाईंले “हे भगवान, यति धेरै मानिस छन्, कसरी अटाउने” भनेर चिन्ता लिनपर्दैन । तपाईं खाली उनीहरु त्यहाँ छन् भनेर सोच्नुहोस् । यसलाई जटिल नबनाउनुहोस् । ध्यानको उद्देश्य यो हो कि जब तपाईंले त्यो गर्नुहुन्छ वास्तवमा तपाईंसँग सबै चेतनशील प्राणी हुँदैनन् । यो तपाईंलाई अरुहरुलाई पनि समावेश गर्न सम्झाउन र ध्यान विकेन्द्रिकित गर्नलाई हो ।
३५ कबुल बुद्धहरु । ठुलो आकारमा हेर्न क्लिक गर्नुहोस् वा हाई रिजोलुसनमा बुद्धका तस्विरहरुको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
चार असिमितहरु र ३५ कबुल बुद्धहरु बीच यदि तपाईंसँग समय भए तपाईंले विचार रुपान्तरणको आठ श्लोक पढ्न सक्नुहुन्छ, जुन मेरो मनपर्ने साधना र शिक्षामध्ये एक हो । किन तपाईंलाई थाहा छ? यो भिक्षुहरुको लागि राम्रो हो । यो भिक्षुणीहरुको लागि राम्रो हो । यो सामान्य व्यक्तिहरुको लागि राम्रो हो । यो वृद्धवृद्धाहरुको लागि राम्रो हो । यो जवानहरुको लागि राम्रो हो । यो एक सुन्दर साधना हो । यो साधनाको सार हो । यो सबै धर्मको सार हो । सबै धर्मको उद्देश्य करुणाको विकास गर्नु हो । दयालु (करुणामय) नभएको व्यक्ति कसरी धार्मिक व्यक्ति हुन्सक्छ? मेरो मतलब यदि तपाईं दयालु हुनुहुन्न भने धार्मिक व्यक्ति हुनुको के मतलब । हैन त? मुख्य कुरा नै यहि हो । दयालु हुने । हैन त? त्यसको मतलब सबै सहने होइन । जस्तै यदि तपाईंलाई बन्धक बनाएर कसैले चोरी गर्यो भने “ ए, ॐ मणिपद्मे हूँ, होइन । तपाईंले उनीहरुलाई पुलिसमा रिपोर्ट गर्नुहोस् । करुणाको मतलब जे पनि सहने होइन । यसको मतलब अरुबाट प्रयोग हुनु वा दुर्व्यवहार झेल्नु होइन । त्यो करुणा होइन किनभने उनीहरुले पनि नकारात्मक कर्महरु जम्मा गरिरहेका हुन्छन् ।
दैनिक हामीले साष्टांग प्रणाम गर्दा, परिक्रमा गर्दा हामीले गम्भीरतापुर्वक गर्नुपर्छ । हामी धर्म साथीसँग जान सक्छौँ । हामी आफै जान सक्छौँ तर हामीले यो गम्भीरतापुर्वक गर्नुपर्छ । तपाईंले जानुभन्दा अघि वा जाँदा साधना र प्रार्थना पाठ गर्न सक्नुहुन्छ । कुन साधना, कुन प्रार्थना ? ३५ कबुल बुद्धहरु । र उनीहरुमा आस्था राख्नुहोस् । महत्वपूर्ण कुरा भनेको यसमा केहि शोध (अनुसन्धान) गर्नुहोस् । अरुले भनेको कुरा त्यतिकै नमान्नुहोस् । ३५ कबुल बुद्धहरु को हुन् भनि चिनियाँ र अंग्रेजी भाषामा अनुसन्धान गर्नुहोस् । उनीहरु को हुन्, उनीहरुसँग शुद्धिकरण गर्ने शक्ति किन छ, यसको श्रोत के हो र यसको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुहोस् । गेलुग्पा, न्यिंग्मा, शाक्य, काग्यु सबै सम्प्रदायले यसको साधना गर्छन् । र यो साधना तिब्बतबाट आएको होइन । यो भारतबाट आएको हो । र चिनियाँहरु यसको अभ्यास गर्छन् । त्यसैले यो एक सुन्दर सुत्र हो ।
म व्यक्तिगत रुपमा यो सुत्र मनपराउँछु । यो मेरो मनपर्ने सुत्रहरुमध्ये एक हो । त्यसकारण तपाईंले यो गर्नुपर्छ र यदि तपाईंले यसलाई कण्ठस्थ (याद) गर्न सक्नुहुन्न भने यसलाई बोक्नुहोस् । र यो च्यातियो भने यसको फोटोकपी गर्नुहोस् र तपाईंसँग बोक्नुहोस् । जब तपाईं स्तुपा जानुहुन्छ, यसलाई पाठ गर्नुहोस् । वरिपरी जानुहोस् र यसको पाठ गर्नुहोस् । स्तुपा वरिपरी परिक्रमा गर्नुहोस्, आफ्नो पाइला हेर्नुहोस र यसको पाठ गर्नुहोस् । वा स्तुपाको अगाडि उभिनुहोस्, ताराको अगाडि उभिनुहोस्, मन्जुश्रीको अगाडि उभिनुहोस् र त्यसपछि परिक्रमा गर्नुहोस् । यो गर्ने आफ्नो विशेष तरिका पत्ता लगाउनुहोस् । मुख्य कुरा भनेको यो गर्नु हो । हामी यहाँ छौँ त्यसैले हामीले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म यी सुविधाहरुको उपयोग गरौँ र आफ्नो समय बर्बाद नगरौं । यो एकदमै महत्वपूर्ण कुरा हो । यो हाम्रो शरीरको उपचार गर्नको लागि राम्रो हुनेछ । यो हाम्रो हाम्रो आयु बढाउन राम्रो हुनेछ । यो हाम्रो मनबाट बाधाहरु हटाउन राम्रो हुनेछ । यो हाम्रो मनमा हामीले विकास गर्न चाहने सद्गुणहरुको विकास गर्न धेरै राम्रो हुनेछ । यी सबैको लागि यो राम्रो हुनेछ ।
केचारा फरेस्ट रिट्रीटमा स्वप्न मन्जुश्री
मानिसहरुको लागि मेरो विशेष साधना मैले भने जस्तै – शरण, चार असिमितहरु, विचार रुपान्तरणका आठ श्लोक, ३५ कबुल बुद्धहरु र समर्पण हुन् । र तपाईंले परिक्रमा गर्दा वा साष्टांग प्रणाम गर्दा ३५ कबुल बुद्धको सुत्र पाठ गर्न सक्नुहुन्छ वा खाली उनीहरुको नाम वा शाक्यमुनिको मन्त्र वा वज्रस्त्त्वको मन्त्र वा कुनै बुद्धको मन्त्र, दोर्जे नामजोम, उच्छुस्माको मन्त्रको पाठ गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले कालो मन्जुश्रीको मन्त्र पाठ गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले श्वेत ताराको मन्त्र पाठ गर्न सक्नुहुन्छ । शुद्धिकरण सम्बन्धि जेसुकै कुरा पनि राम्रो हुनेछ । र अन्त्यमा चार प्रतिद्वन्दी शक्तिहरु प्रयोग गर्नुहोस् । “चार प्रतिद्वन्दी शक्तिहरु” के हुन् भनि अनुसन्धान गर्नुहोस् ।
तपाईंले तपाईंको परिक्रमा र साष्टांग प्रणाम सम्पन्न गरेपछि शाक्यमुनि बुद्धमा पूर्ण रुपमा शरण लिनुहोस् । बुद्धहरुमा शरण लिनुहोस् र उनीहरुलाई भरोसा गर्नुहोस् र समर्पण गर्नुहोस् र शान्त र खुशी हुनुहोस् । र यदि त्यस दिन तपाईंको निधन हुने हो भने यो नै तपाईंले गरेको अन्तिम कार्य होस् । कति सुन्दर । केहि मानिसहरुको लागि उनीहरुले आफ्नो जीवनमा गरेको अन्तिम कार्य पिउने हुनेछ । उनीहरु बाहिर जान्छन्, पार्टी गर्छन् आफ्नो आफन्तको हात समाउँछन् । यी सबै रोचक कार्यहरु हुन् तर यी धेरै उपयोगी हुँदैनन् । तपाईंले अन्तिम दिनमा ३५ कबुल बुद्धहरुको पाठ गरेको हुनुपर्छ । यसको मतलब तपाईंको आज वा भोलि नै निधन हुन्छ भन्ने होइन । त्यसको मतलब केहि सकारात्मक र राम्रो कुराको साथ हामी आफ्नो मृत्युको तयारीको बानी बसाल्छौँ । र यदि कोहि यस्तो छ जसको बारेमा तपाईं सोचिरहनुभएको छ वा चिन्तित हुनुहुन्छ भने तपाईंको परिक्रमा यात्रामा केहि मैनबत्तीहरु ल्याउनुहोस् र प्रत्येक स्थानमा अर्पण गर्नुहोस् । हाम्रो पैसा सानो मनोरंजन र रोमान्चक कुरामा खर्चिनुभन्दा त्यसमा खर्चिनु राम्रो हुन्छ । बुद्धहरुलाई अर्पण गरेको कुरा कहिल्यै खेर जादैन । होइन त? त्यसकारण यो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।
बुद्ध शाक्यमुनिको थान्का । उनको माथि गुरु रिन्पोछे र लामा चोंखापा हुनुहुन्छ र तल चारमुखी महाकाल, दोर्जे शुग्देन, पाल्देन ल्हामो र दोर्जे द्रोलो धर्म रक्षकहरु हुनुहुन्छ। ठुलो आकारमा हेर्न क्लिक गर्नुहोस् वा हाई रिजोलुसनमा बुद्धका तस्विरहरुको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
म केएफआरमा भएका सबैलाई धर्म अभ्यास गरेको र यस अवसरलाई उपयोग गरेको देख्न चाहन्छु । यस स्थानमा हामीले धेरै उर्जा दिएका छौँ । हामी यहाँ छौँ त्यसैले थप धर्म गरौँ । र हामीले आफ्नो बच्चाहरुलाई पनि सँगै लानु राम्रो हुन्छ । हाम्रा बच्चाहरुले यी कुराहरु नबुझ्न सक्छन् र यदि तपाईंले सिकाउनुभयो भने पनि उनीहरुले यसलाई नमान्न सक्छन् । त्यो ठिकै छ । वरीपरी हिड्नुहोस् र उनीहरुसँग समय बिताउनुहोस् । जब उनीहरुको उमेर बढ्नेछ तब उनीहरुले आफ्नो लागि आमा, बुवा वा साथीले के गरे भनेर फर्केर सोच्नेछन् । र त्यसपछि उनीहरुले मनन गर्नेछन् र उनीहरु खुल्नेछन् र थप कुरा बुझ्नेछन् । त्यो छाप उनीहरुमा छोड्नुहोस् । आफ्नो जनावर साथ लानुहोस् । आफ्नो बालबच्चा साथ लानुहोस् । आफै जानुहोस् । यो अभ्यास नछुटाउन सक्दो प्रयास गर्नुहोस् । प्रयास गर्नुहोस् । किन थाहा छ? तपाईं यसको योग्य हुनुहुन्छ । यो तपाईंले आफ्नो लागि गर्न सक्ने सबैभन्दा राम्रो कुरा हो । तपाईंको यहाँ हुने केहि कर्म छ । किन नहुने? हामीले सद्गुण प्राप्त गर्न बोधगया जानुपर्दैन तथापी त्यो निकै सुन्दर र शक्तिशाली स्थान हो र एक दिन हामी जानुपर्छ । हमिएल वु ताइ शान वा कुनै तिर्थस्थल जानुपर्दैन । हामीसँग यहाँ आफ्नै पवित्र स्थान छ ।
मिलारेपाको विध्यार्थी रेचुंगपाले बुद्धको जन्म, निर्वाण, शिक्षण र निधनसम्बन्धि पवित्र स्थानहरु भ्रमण गर्न भारत जानको लागि मिलारेपाको अनुमति मागे । मिलारेपाले भने, “सबैभन्दा पवित्र स्थान, त्यो स्थान हो जहाँ तपाईंको गुरु बास गर्छन् । तपाईंको लागि त्यो सबैभन्दा उपयुक्त तिर्थस्थान हो । त्यो स्थान साष्टांग प्रणाम गर्न सबैभन्दा उपयुक्त स्थान हो । त्यो स्थान अर्पण गर्न, सफा गर्न र आफ्नो परिश्रम गर्न सबैभन्दा उपयुक्त स्थान हो ।” उनलाई त्यो कुरा भनिएको थियो । यो सबैलाई लागू नहुन सक्छ । सबैसँग गुरु हुँदैनन् । सबैजना आफ्नो गुरुसँग निकट हुँदैनन् । सबैको त्यस प्रकारको सम्बन्ध हुँदैन । त्यसकारण केहि मानिसहरुको लागि बोधगया जानु महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीले त्यसलाई नकार्दैनौ । शायद केहि मानिसलाई मन्जुश्रीको पवित्र स्थानमा जानु महत्वपूर्ण हुन्छ ।
मिलारेपा । ठुलो आकारमा हेर्न क्लिक गर्नुहोस् वा हाई रिजोलुसनमा बुद्धका तस्विरहरुको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
हामीले यो शिक्षा केचारा फरेस्ट रिट्रीटका सबै निवासीसँग बाँड्नुपर्छ र उनीहरुले बुझुन भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । हामीले यस शिक्षालाई सबैसँग बाँड्नुपर्छ किनकि केचारा फरेस्ट रिट्रीटमा हामीले यसको नै अभ्यास गर्नुपर्छ । रक्षकको साधना सामान्य हो । यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ । मलाई यो गर्न मनपर्छ ।
यो केन्ट कोकको लागि हो तर यो हामी सबैको लागि उपयुक्त हुन्छ । र यदि केन्ट कोकलाई कुन मन्त्रमा उनले ध्यान दिनुपर्छ भनेर सोधे उनको सन्दर्भमा, हात्तीमा दोर्जे शुग्देन । यदि त्यो उनको लागि गाह्रो भए, दोर्जे शुग्देन किनकि उनीसँग दृढ आस्था छ । त्यसकारण दोर्जे शुग्देन मन्जुश्री हुन् । मन्जुश्री एक शक्तिशाली चिकित्सक बुद्ध हुन् । उनी धेरै चिकित्सक रुपमा अवतरित भएका छन् त्यसकारण यो उनको लागि धेरै शक्तिशाली हुनेछ । उनको लागि त्यो ठिक हुन्छ ।
तपाईंहरु अन्यका लागि, तपाईंहरुले शाक्यमुनिको मन्त्र, मिग्त्सेमा, तारा, दोर्जे नामजोम, अमितायुस छनौट गर्न सक्नुहुन्छ । यो तपाईंमा निर्भर गर्छ वा तपाईंको गुरुले तपाईंको लागि छनौट गर्नुहुनेछ। मन्त्र महत्वपूर्ण हुन्छ तर यसको लाभ बुझ्नु झनै महत्वपूर्ण हुन्छ र यसलाई लगातार, निरन्तर गर्नु र अन्त्यमा समर्पण गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । म हामी सबैले परिक्रमा गरेको देख्न चाहन्छु । यो हाम्रो सानो घर हो । यो हाम्रो समुदाय हो त्यसकारण यसको भरपुर उपयोग गरौँ ।
सम्झनुहोस्, बिसन्चो भएर यहाँ ठिक हुन जो बस्नुहुन्छ, उनीहरुलाई यो शिक्षा बाँड्नुहोस् । दयालु बन्नुहोस् । तपाईंलाई निराश बनाएपनि मानिसहरुसँग निरन्तर धर्म बाँड्नुहोस् । उनीहरुले तपाईंलाई निराश बनाउने कारण उनीहरुको स्वार्थी मन र आत्मकेन्द्रित मन बलियो हुनु हो र त्यसपछि तपाईं पक्कै पनि निराश हुनुहुन्छ किनकि तपाईंको आत्मकेन्द्रित मन बलियो छ । त्यसकारण कोहि पनि निर्दोष छैनन्, हैन त? कोहि पनि दोषी छैनन्, कोही पनि निर्दोष छैनन् । सबै बराबर छन् ।
अति सुन्दर । शुभ सन्ध्या ।
३५ कबुल बुद्धहरु
महान् लामा अतिशाले पैँतीस कबुल बुद्धहरुको नामको पाठ गर्नुको शक्तिलाई स्वीकारेका छन् । यो भनिन्छ कि विगतमा जब पैँतीस बुद्धहरु बोधिसत्त्व हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुले चेतनशील प्राणीहरुलाई लाभ पुर्याउन, हाम्रो अशुद्धता र नकारात्मक कर्मलाई शुद्ध बनाउनका लागि धेरै प्रार्थनाहरु बनाउनुभयो ।
जब उहाँहरुले अन्ततः प्रबुद्धता प्राप्त गर्नुभयो, उहाँहरुले बुद्धको दश गुण वा शक्ति हाँसिल गर्नुभयो । तीमध्ये एक प्रार्थनाको शक्ति हो । त्यसकारण उहाँहरुको नाममा ती सबै पहिलेका प्रार्थनाहरुको शक्ति छ । त्यसकारण जब चेतनशील प्राणीहरुले उहाँहरुको नामको पाठ गर्छन्, यसमा अशुद्धताहरु र युगौं युगको नकारात्मक कर्म शुद्ध बनाउने शक्ति हुन्छ ।
तल प्रत्येक ३५ कबुल बुद्धहरुको नाम, चित्रण, विशेष लाभ र तस्वीरको साथ उहाँहरुको परिचयको सारांश छ ।
१. तथागत, बुद्ध शाक्यमुनि
ठूलो पार्नको लागि छविमा क्लिक गर्नुहोस्
तिब्बती: ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ། (शाक्य थुब्पा)
परिवार: अक्षोभयाको वज्र परिवार
वर्णन: उहाँ सुनौलो रंगको हुनुहुन्छ र उहाँको हात जमिन छोएको मुद्रा वा भुमिस्पर्श मुद्रामा हुन्छ र उहाँ पूर्ण ध्यान मुद्रामा हुनुहुन्छ । उहाँको नाममा धेरै सम्मानित पदवी जोडिएको छ जस्तै कि “शत्रु विनाशक र पूर्णतः उत्कृष्ट”, जुन उहाँको प्रबुद्ध प्रकृतिको कारण उदाएको विशेष गुणको कारण श्रद्दास्वरूप भनिन्छ ।
शुद्धिकरण: १०,००० युगसम्म जम्मा भएको सबै नकारात्मक कर्मको शुद्धिकरण
२. तथागत, वज्रको सार (वज्र प्रामर्थिन) भएका पूर्ण अधिनकर्ता
तिब्बती: རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོས་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ། (दोर्जे निंगपोइ रब्तु जोम्पा)
वर्णन: उहाँको वर्ण निलो छ र उहाँले आफ्नो हातमा सुनौलो रंगको वज्र बोक्नुहुन्छ । ‘वज्र’ वा अभेद्यले उहाँको आदिम प्रकृति जनाउँछ, जुन गैर-वैचारिक छ । ‘आकाशको सार’ नामको संसारमा उहाँ बुद्ध शाक्यमुनिभन्दा माथि बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: मनो-वेदना र १०,००० युगसम्म जम्मा भएका नकारात्मक कर्महरुको शुद्धिकरण
३. तथागत, उज्यालो प्रकाशका रत्न (रत्नार्ची)
तिब्बती: རིན་ཆེན་འོད་འཕྲོ། (रिन्चेन ओत्रो)
वर्णन: उहाँको वर्ण सेतो रंगको छ र उहाँले आफ्नो हातमा वज्र र सुर्य दुवै बोक्नुहुन्छ । उहाँको नाममा रहेको ‘रत्न’ले उहाँको उत्कृष्ट गुण जनाउँछ, जुन अपरिवर्तित जागरुकता हो । यो स्पष्ट प्रकाशजस्तै हो जसले अज्ञानताको अन्धकार हटाउँछ । ‘उज्यालो प्रकाश’ले चेतनशील प्राणीको अज्ञानता हटाउन सहायता दिने उहाँको क्षमतालाई जनाउँछ । ‘रत्नहरु साथ सम्पन्न’ भनिने संसारमा उहाँ बुद्ध शाक्यमुनिभन्दा अगाडि पुर्वमा बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: २५,००० युगसम्म जम्मा भएको नकारात्मक कर्महरुको शुद्धिकरण
४. तथागत, नागहरुको शक्तिशाली राजा (नागेश्वर राजा)
तिब्बती: ཀླུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ། (लुवांग ग्यी ग्याल्पो)
वर्णन: उहाँको वर्ण निलो रंगको छ र उहाँले आफ्नो हातमा नाग रुखको हाँगा र निलो सर्प बोक्नुहुन्छ । उहाँको नाममा रहेको ‘नाग’ले उहाँको आदिम जागरुकतालाई जनाउँछ, जुन शान्त पार्ने खालको हुन्छ र यो निहित अस्तित्वमा लोभलाई नाश गर्ने सन्दर्भसँग पनि सम्बन्धित छ । उहाँ पूर्ण प्रबुद्ध प्राणीको सीमाहीन गुणमा गौरवशाली राजा हुनुहुन्छ जसले आफ्नो मनप्रवाहमा भएको डरको सबै निशान हटाउनुभएको छ । ‘नागहरुबाट व्याप्त’ नामको संसारमा उहाँ बुद्ध शाक्यमुनिको दक्षिण-पुर्वमा बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: आठ युगसम्म जम्मा भएको नकारात्मक कर्महरुको शुद्धिकरण
५. तथागत, नायकहरुका नेता (वीरसेना)
तिब्बती: དཔའ་བོའི་སྡེ། (पावो दे)
वर्णन: उहाँ पहेँलो वर्णको हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो हातमा धर्म ग्रन्थ र तरवार बोक्नुहुन्छ । उहाँको नाममा रहेको ‘नायक’ले उहाँको आदिम जागरुकता जनाउँछ, जुन अतुलनीय छ र यो उहाँको अस्तित्वको चक्रको सबै युद्धमा अपराजित र विजयी हुने तरिकासँग पनि सम्बन्धित छ । ‘नेता’ भन्नाले पूर्ण प्रबुद्ध प्राणीको उत्कृष्टताको संचयलाई जनाउँछ । ‘नायकहरुद्वारा व्याप्त’ संसारमा उहाँ बुद्ध शाक्यमुनिको दक्षिणमा बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: बोलीको नकारात्मक कर्मको शुद्धिकरण
६. तथागत, गौरवशाली आनन्द (वीर नन्दी)
तिब्बती: དཔལ་བོ་དགྱེས། (पेल्वो ग्ये)
वर्णन: उहाँको वर्ण सुन्तला रंगको छ र उहाँले हातमा सुर्य र रातो कमल बोक्नुहुन्छ । उहाँको नाममा रहेको ‘आनन्द’ले चेतनशील प्राणीप्रतिको विशाल करुणालाई जनाउँछ । ‘आनन्दले सम्पन्न’ भनिने संसारमा उहाँ दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: मनको नकारात्मक कर्मको शुद्धिकरण
७. तथागत, रत्न अग्नि (रत्नग्नी)
तिब्बती: རིན་ཆེན་མེ། (रिन्चेन मे)
वर्णन: उहाँको वर्ण रातो रंगको छ र उहाँले आफ्नो हातमा बहुमुल्य रत्न र आगोको घेरा बोक्नुहुन्छ । उहाँको नाममा रहेको ‘रत्न”ले उहाँको अपरिवर्तित जागुरक्ता जनाउँछ, जुन अप्रासंगिक विचारबाट मुक्त छ । उहाँको उत्कृष्ट गुणहरु ध्यानी सन्तुलनबाट उदाउँछन् र ती गुणहरु अन्तर्दृष्टि र सद्गुणको संकलनमा पूर्ण हुन्छन् । उहाँको नाममा रहेको ‘अग्नि’ले जागरुकतामार्फत चेतनशील प्राणीहरुलाई लाभ दिने र विशाल उर्जामार्फत मनोव्यथा हटाउने उहाँको महान् क्षमतालाई जनाउँछ । ‘प्रकाशले व्याप्त’ भनिने संसारमा उहाँ पश्चिम क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: संघमा फुट ल्याउने अत्यधिक नकारात्मक कर्मको शुद्धिकरण
८. तथागत, रत्न चन्द्रप्रभा
तिब्बती: རིན་ཆེན་ཟླ་འོད། (रिन्चेन दाओ)
परिवार: वैरोचनाको तथागत परिवार
वर्णन: उहाँको वर्ण सेतो रंगको छ र उहाँले आफ्नो हातमा रत्न र चन्द्रमा बोक्नुहुन्छ । उहाँको नाममा रहेको ‘चन्द्रमा’ले सबै नकारात्मकताबाट मुक्त उहाँको आदिम जागरुकताको उत्कृष्ट स्थितिलाई जनाउँछ । ‘चन्द्रमा प्रकाश’ले उहाँको जागरुकता जनाउँछ, जुन पूर्ण, उज्यालो र शितल छ । प्रकाशले बुद्धत्वको मार्गलाई प्रकाश दिँदै नकरात्मक कर्म र दुखदायी भावनालाई शुद्धिकरण गर्छ । उहाँ ’उत्कृष्ट प्रकाश’ नामको उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रमा दृढ भई बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: एक युगमा जम्मा भएको नकारात्मक कर्मको शुद्धिकरण
९. तथागत, हेर्नको लागि अर्थपूर्ण (अमोघादर्शी)
तिब्बती: མཐོང་བ་དོན་ཡོད། (थोंग्वा दोन्य)
वर्णन: उहाँको वर्ण हरियो रंगको छ र उहाँ पूर्ण प्रबुद्ध प्राणीको दुई आँखाको धारक हुनुहुन्छ । उहाँसँग सहज आदिम जागरुकता छ । उहाँसँग वास्तविकताको प्रकृति र चेतनशील प्राणीहरुको कर्म बुझ्ने विवेक (र विशाल करुणा)का आँखा भएको उत्कृष्ट गुण पनि छ । ‘ढोलको आवाज’ भनिने संसारमा उहाँ उत्तरी क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: श्रेष्ठ प्राणीहरुलाई आलोचना गरेकोले उत्पन्न भारी नकारात्मक कर्म शुद्धिकरण
१०. तथागत, रत्न चन्द्र
तिब्बती: རིན་ཆེན་ཟླ་བ། (रिन्चेन दावा)
वर्णन: उहाँको वर्ण फिक्का-हरियोको छ र उहाँले आफ्नो हातमा बहुमुल्य रत्न र चन्द्रमा बोक्नुहुन्छ । उहाँको नाममा रहेको ‘रत्न’ले दागबाट मुक्त उहाँको अपरिवर्तित जागरुकताको उत्कृष्ट गुणलाई जनाउँछ । ‘चन्द्रमा’ ले उहाँको जागरुकता र विशाल करुणालाई जनाउँछ । ‘प्रकाशको किरणबाट विभूषित’ भनिने संसारमा उहाँ उत्तर-पूर्वी क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: आमा मारेको भारी नकरात्मक कर्म
११. तथागत, परम बेदाग (विमला)
तिब्बती: དྲི་མ་མེད་པ། (ड्रिमा मेपा)
वर्णन: उहाँको वर्ण खरानी रंगको छ र उहाँले आफ्नो हातमा दुई बेदाग ऐना बोक्नुहुन्छ । उहाँको नाममा रहेको ‘बेदाग’ले दागबाट मुक्त उहाँको आदिम जागरुकताको भित्री गुणलाई जनाउँछ । र उहाँले चेतनशील प्राणीहरुको कर्मको शुद्धिकरण गर्नुहुन्छ ताकि उनीहरुले पनि ‘बेदाग’ स्थिति प्राप्त गर्न सकुन् । ‘धुलोबाट व्याप्त’ भनिने संसारमा उहाँ बुद्ध शाक्यमुनिको ठिक तल बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: बुवा मारेको भारी नकारात्मक कर्म
१२. तथागत, महिमाद्वारा सम्मानित (श्री दत्त)
तिब्बती: དཔལ་སྦྱིན། (पेल जिन)
वर्णन: उहाँको वर्ण सेतो रंगको छ र उहाँले आफ्नो हातमा रुखको हाँगा बोक्नुहुन्छ जसमा पात र फलफुलहरु फलिरहेको हुन्छ । उहाँको नाममा भएको ‘महिमा’ले उहाँको आदिम जागरुकताको उत्कृष्ट गुणलाई जनाउँछ, जुन दागबाट मुक्त छ । उहाँले चेतनशील प्राणीहरुलाई सद्गुणको पूर्ण संचय र खुशीको साथ अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्नुहुन्छ । उहाँ सबै चेतनशील प्राणीहरुका सर्वोत्तम आनन्द ‘दायक’ र इच्छा पुर्तिकर्ता हुनुहुन्छ । उहाँ ‘महिमाले सम्पन्न’ भनिने संसारमा बुद्ध शाक्यमुनिको माथि बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: अर्हत मारेको भारी नकारात्मक कर्म
१३. तथागत, परम शुद्ध (ब्रह्मा)
तिब्बती: ཚངས་པ། (छांग्पा)
वर्णन: उहाँको वर्ण सुन्तला रंगको छ र उहाँले आफ्नो हातमा एक कमल र सुर्य बोक्नुहुन्छ । उहाँलाई उहाँको बाधारहित अन्तर्निहित आदिम जागरुकताको प्रतिबिम्ब स्वरूप ‘शुद्ध’ भनिन्छ । ‘बाधाबाट मुक्त’ संसारमा उहाँ पूर्वी दिशामा बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: मृत्यु र पुनर्जन्मलाई असर गर्ने कर्म र पूर्ण प्रबुद्ध बुद्धलाई घाइते बनाएकोले भएको भारी नकारात्मक कर्मको शुद्धिकरण
१४. तथागत, शुद्धताको साथ रुपान्तरण (ब्रह्म दत्त)
तिब्बती: ཚངས་པས་སྦྱིན། (छांग्पे जिन)
वर्णन: उहाँको वर्ण पहेलो रंगको छ र उहाँले आफ्नो हातमा एक चन्द्रमा र एक कमल बोक्नुहुन्छ । उहाँको नाममा भएको ‘शुद्धता’ले उहाँको बाधारहित आदिम जागरुकतालाई जनाउँछ । चेतनशील प्राणीहरुको कर्म शुद्ध गर्नुको अलावा उहाँले सबैलाई आनन्द प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ । ‘बिना दुख” संसारमा उहाँ दृढ रुपमा दक्षिण-पूर्वी दिशामा बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: १०,००० युगसम्म जम्मा नकरात्मक कर्मको शुद्धिकरण
१५. तथागत, जल देवता (वरुण)
तिब्बती: ཆུ་ལྷ། (छु ह्ल्हा)
परिवार: रत्नसम्भवको रत्न परिवार
वर्णन: उहाँको वर्ण निलो रंगको छ र उहाँले आफ्नो हात धर्म प्रदान गरेको मुद्रामा राख्नुहुन्छ । उहाँको नाममा रहेको ‘जल’ले उहाँको आदिम जागरुकतालाई जनाउँछ, जुन स्पष्ट र बाधारहित छ । जल वा पानीको गुण, चेतनशील प्राणीको मनप्रवाहलाई धर्मले भरिपूर्ण गर्ने उहाँको विशेष क्षमताको प्रतिक हो । उहाँको नाममा रहेको ‘देवता’ले चेतनशील प्राणीहरुको लाभको लागि अवतार लिन सक्ने उहाँको चमत्कारिक क्षमतालाई जनाउँछ । ‘दागरहित’ भनिने संसारमा उहाँ दक्षिण क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: भिक्षुणी वा अर्हत बलात्कारको नकारात्मक कर्म
१६. तथागत, जलदेवताका भगवान (वरुण देव)
तिब्बती: ཆུ་ལྷའི་ལྷ། (छु ह्ल्हा-यी ह्ल्हा)
वर्णन: उहाँको वर्ण सेतो रंगको छ र उहाँले आफ्नो हातमा जल देवताको चक्र वा मण्डला र ऐना बोक्नुहुन्छ । पुर्व बुद्धको जस्तै, उहाँको नाममा रहेको ‘जल’ले उहाँको आदिम जागरुकतालाई जनाउँछ र ‘देव’ले चेतनशील प्राणीहरुको लाभको लागि अवतार लिनसक्ने उहाँको क्षमतालाई जनाउँछ । ‘उत्कृष्ट स्पष्टता’ भनिने संसारमा उहाँ दृढताको साथ दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: बोधिसत्त्वहरु मारेको भारी नकारात्मक कर्म
१७. तथागत, गौरवशाली उत्कृष्टता (श्री भद्र)
तिब्बती: དཔལ་བཟང་། (पेल्जांग)
वर्णन: उहाँको वर्ण रातो रंगको छ र उहाँले एक कमल र इच्छा पुरा गर्ने रुखको हाँगा बोक्नुहुन्छ । उहाँको नाममा रहेको ‘गौरवशाली’ले चेतनशील प्राणीहरुको लागि उहाँको पूर्ण सिद्ध मनलाई जनाउँछ । ‘उत्कृष्टता’ले उहाँको आदिम जागरुकतालाई जनाउँछ । ‘आनन्ददायक’ भनिने संसारमा उहाँ दृढताको साथ पश्चिमी क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: चेतनशील प्राणीहरुलाई पूर्ण बुद्धत्वको स्थिति प्रदान गरि शुद्धिकरण गर्छ ।
१८. तथागत, गौरवशाली चन्दन (चन्दन श्री)
तिब्बती: བཙན་དན་དཔལ། (छेन्देन पेल)
वर्णन: उहाँको वर्ण सुन्तला रंगको छ र उहाँको हातमा चन्दन रुखको हाँगा र एक गौरवशाली फुल हुन्छ । उहाँको नाममा रहेको ‘चन्दन’ले उहाँको ‘शान्त हुने’ उत्कृष्ट गुण र अज्ञानता लगायतका भावनात्मक व्यथा शुद्धिकरण गर्ने क्षमतालाई जनाउँछ । जब चन्दन बालिन्छ तब चन्दनको सुगन्धले पुरा कोठा भरिन्छ । त्यसैगरी उहाँले चेतनशील प्राणीहरुलाई आफ्नो उत्कृष्टताको सर्वोत्तम गुणले भरिदिने क्षमता राख्नुहुन्छ । ‘सुगन्धले व्याप्त’ भनिने संसारमा उहाँ उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: संघ समुदायबाट चोरेको कारण उत्पन्न नकारात्मक कर्मको शुद्धिकरण
१९. तथागत, अनन्त वैभव (अनन्तौजस)
तिब्बती: གཟི་བརྗིད་མཐའ་ཡས། (शीजी थाए)
वर्णन: उहाँको वर्ण रातो रंगको छ र उहाँको हातमा दुई सुर्यहरु छन् र उहाँ अनुयायीहरुले घेरिनुभएको छ । उहाँको नाममा रहेको ‘वैभव’ले उहाँको आदिम जागरुकता र चेतनशील प्राणीहरुलाई सर्वाच्च सप्ष्टता दिन सक्ने उहाँको क्षमतालाई जनाउँछ । ‘अनन्त’ले चेतनशील प्राणीलाई मुक्ति दिने उहाँको अनन्त क्षमतालाई जनाउँछ र यसले उहाँको असंख्य उत्कृष्ट गुणहरुलाई पनि जनाउँछ । ‘वैभवले व्याप्त’ भनिने संसारमा उहाँ उत्तरी क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: स्तुपाहरु भत्काएको नकरात्मक कर्मको शुद्धिकरण
२०. तथागत, गौरवशाली प्रकाश (प्रभा श्री)
तिब्बती: འོད་དཔལ། (ओ पेल)
रिवार: रत्नसम्भवको रत्न परिवार
वर्णन: उहाँको वर्ण सेतो रंगको छ र उहाँले सेतो प्रकाशको चक्र बोक्नुहुन्छ । उहाँको नाममा रहेको ‘प्रकाश’ले उहाँको आदिम जागरुकतालाई जनाउँछ, जुन सुर्यजस्तै छ, जसले अस्पष्टताको कारण हुने अन्धकारलाई हटाउँदै मुक्ति र सर्वज्ञानी बन्ने मार्ग खोल्छ । ‘गौरवशाली’ले उहाँको पूर्ण प्रबुद्ध प्राणीको उत्कृष्ट र सहि गुणलाई जनाउँछ । ‘अर्थपूर्ण’ भनिने संसारमा उहाँ उत्तर-पूर्वी क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: घृणाबाट प्रेरित भएर गरिने कार्यबाट हुने नकारात्मक कर्मको शुद्धिकरण
२१. तथागत, दुखबिना गौरवशाली (अशोकश्री)
तिब्बती: མྱ་ངན་མེད་པའི་དཔལ། (न्याङेन मेपे पेल)
वर्णन: उहाँको वर्ण फिक्का निलो रंगको छ र उहाँले आफ्नो हातमा अशोक रुखको हाँगा बोक्नुहुन्छ । उहाँको नाममा रहेको ‘बिना दुख’ले उहाँको आदिम जागरुकतालाई जनाउँछ, जसले चक्रिय अस्तित्वलाई पार गरेको हुन्छ र जसमा चेतनशील प्राणीहरुलाई मुक्ति दिने क्षमता हुन्छ । ‘गौरवशाली’ले उहाँको उत्कृष्ट गुणहरुलाई जनाउँछ । ‘अबाधित’ भनिने संसारमा उहाँ परम दागरहितको तल बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: मायामोहबाट हुने नकारात्मक कर्मको शुद्धिकरण
२२. तथागत, लालचबिनाको छोरा (नारायण)
तिब्बती: སྲེད་མེད་ཀྱི་བུ། (शेमे क्यी बु)
परिवार: अमिताभको कमल परिवार
वर्णन: उहाँको वर्ण निलो रंगको छ र उहाँले कमल समाई आफ्ना हात मेरु पर्वतको मुद्रामा राख्नुहुन्छ । उहाँको नाममा रहेको ‘लालचबिना’ले उहाँको आदिम जागरुकतालाई जनाउँछ, जुन सबै नकारात्मक व्यथाबाट मुक्त हुन्छ । र यसले उहाँले चेतनशील प्राणीलाई मायामोहको चक्रिय अस्तित्वबाट मुक्ति दिनुहुन्छ भन्ने जनाउँछ । ‘छोरा’ले उहाँ जागरुक स्थितिमा जन्मेको र उहाँको माया र दयाको गुणलाई जनाउँछ । ‘मायामोहबाट मुक्त’ भनिने संसारमा उहाँ दृढताको साथ बुद्ध शाक्यमुनिको माथि बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: १०,००० युगसम्म जम्मा भएको नकारात्मक कर्मको शुद्धिकरण
२३. तथागत, गौरवशाली फुल (कुसुम श्री)
तिब्बती: མེ་ཏོག་དཔལ། (मेतोग पेल)
वर्णन: उहाँको वर्ण पहेलो रंगको छ र उहाँले आफ्नो हातमा पहेँलो फुल र गौरवशाली फल बोक्नुहुन्छ । उहाँको नाममा रहेको ‘फुल’ले उहाँको फुलिरहेको आदिम जागरुकतालाई जनाउँछ, जुन सुन्दर हुन्छ र जसले चेतनशील प्राणीमा उत्कृष्ट गुण प्रकट गर्दछ । ‘गौरवशाली’ले उहाँले चेतनशील प्राणीलाई दिनुभएको पूर्ण उत्कृष्टतालाई जनाउँछ । ‘बढिरहेको फूलहरु’ भनिने संसारमा उहाँ पूर्वी क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: १००,००० युगहरुसम्म जम्मा नकारात्मक कर्मको शुद्धिकरण
२४. तथागत, शुद्ध प्रकाशको आनन्द लिएर स्पष्ट रुपमा बुझ्ने (ब्रह्म ज्योति)
तिब्बती: དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚངས་པའི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་རོལ་པ་མངོན་པར་མཁྱེན་པ། (डेझीन शेग्पा छांग्पे ओजेर नाम्पार रोल्पा ङोनपार ख्येंपा)
वर्णन: उहाँको वर्ण सेतो रंगको छ र उहाँले आफ्नो हातमा कमल र प्रकाशको पोखरी बोक्नुहुन्छ । ‘तथागत’ वा ‘डेझीन शेग्पा’ पदवी विशेषरुपमा बुद्धलाई दिइन्छ तर यो अन्य बुद्धहरुलाई पनि दिइन्छ । ‘शुद्धता’ले उहाँको आदिम जागरुकता र ‘शुद्ध प्रकाश’ले उहाँको विभिन्न उत्कृष्ट गुणलाई जनाउँछ । ‘आनन्द’ले चेतनशील प्राणीको लाभको लागि उहाँको अवतार लिने महान् क्षमतालाई जनाउँछ । ‘शुद्धताले व्याप्त’ भनिने संसारमा उहाँ दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: १,००० युगसम्म जम्मा नकारात्मक कर्मलाई मेटाउँछ
२५. तथागत, कमल प्रकाशको आनन्द लिएर स्पष्ट रुपमा बुझ्ने (पद्म ज्योति)
तिब्बती: དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་པདྨའི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་རོལ་པས་མངོན་པར་མཁྱེན་པ། (डेझीन शेग्पा पद्मे ओजेर नाम्पार रोल्पे ङोनपार ख्येंपा)
वर्णन: उहाँको वर्ण रातो रंगको छ र उहाँको हात कमल र सुर्य बोकेको मुद्रामा हुन्छ । उहाँको नाममा रहेको ‘कमल’ले उहाँको आदिम जागरुकतालाई जनाउँछ, जुन फुल्छ र जसले सांसारिक गल्तिहरुको त्यागको लागि प्रेरणा दिन्छ । ‘कमल प्रकाशको आनन्द लिएर स्पष्ट रुपमा बुझ्ने’ भन्ने वाक्यांशले प्रबुद्ध प्राणी उहाँमा भएका विभिन्न उत्कृष्ट गुणहरुलाई जनाउँछ । ‘कमलहरुले व्याप्त’ भनिने संसारमा उहाँ दक्षिणी क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: सात युगसम्म जम्मा नकारात्मक कर्मको शुद्धिकरण
२६. तथागत, गौरवशाली धन (धन श्री)
तिब्बती: ནོར་དཔལ། (नोर पेल)
वर्णन: उहाँको वर्ण रातो रंगको छ र उहाँले आफ्नो हातमा दुई रत्न बोक्नुहुन्छ । रत्न वा धनले यहाँ उहाँको आदिम जागरुकतालाई जनाउँछ जसको धेरै उत्कृष्ट गुणहरु छ र जुन बढिरहेको छ । उहाँले चेतनशील प्राणीहरुको इच्छाहरु पुरा गर्नुहुन्छ । उहाँको नाममा रहेको ‘गौरवशाली’ले चेतनशील प्राणीहरुलाई पूर्ण उत्कृष्टता प्रदान गर्न सक्ने उहाँको क्षमतालाई जनाउँछ । ‘रत्नले व्याप्त’ भनिने संसारमा उहाँ दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: खराब बानीबाट हुने नकारात्मक कर्मको शुद्धिकरण
२७. तथागत, गौरवशाली विचारशिलता (स्मृति श्री)
तिब्बती: དྲན་པའི་དཔལ། (ड्रेन्पे पेल)
वर्णन: उहाँको वर्ण पहेलो रंगको छ र उहाँले आफ्नो हातमा एक तरवार र धर्म ग्रन्थ बोक्नुहुन्छ । उहाँको नाममा रहेको ‘विचारशिलता”ले उहाँको नभुल्ने आदिम जागरुकता र उहाँको आफ्नो सबै पुर्वजन्महरू सम्झिन सक्ने क्षमतालाई जनाउँछ । ‘गौरवशाली’ले उहाँले चेतनशील प्राणीहरुलाई पूर्ण उत्कृष्टता प्रदान गर्न सक्ने क्षमतालाई जनाउँछ । ‘पूर्ण रुपमा स्पष्टता’ भनिने संसारमा उहाँ दृढताका साथ पश्चिमी क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: शरीरको नकारात्मक कर्मको शुद्धिकरण
२८. तथागत, महान् यशको गौरवशाली नाम (सुपरिकिर्तित नाम श्री)
तिब्बती: མཚན་དཔལ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ། (छेन्पेल शिन्तु योंग्सु ड्राक्पा)
वर्णन: उहाँको वर्ण हरियो रंगको छ र उहाँका हातले बुद्धको उहाँको टाउको माथि मुकुट बोक्छन् । यहाँ ‘नाम’ले यथार्थ बुझ्ने उहाँको आदिम जागरुकतालाई जनाउँछ, जुन यस्तो घटना हो जसको अन्तर्निहित अस्तित्व नै हुँदैन । ‘महान् यश’ले असिमित ख्यातिलाई जनाउँछ जसले अस्तित्वको तीन लोकहरु (आकार, आकारहिन र इच्छा लोकहरु)लाई पार गर्छ । ‘संकेतहिन’ भनिने संसारमा उहाँ उत्तर-पश्चिम क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: बुद्धहरूलाई निराश बनाएकोले भएको नकारात्मक कर्मको शुद्धिकरण
२९. तथागत, विजयी ध्वजाका राजा (इन्द्रकेतु ध्वजा)
तिब्बती: དབང་པོའི་ཏོག་གི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྒྱལ་པོ། (वांगपोइ तोग गि ग्याल्छेन ग्यी ग्याल्पो)
परिवार: अमोघासिद्धिको कर्म परिवार
वर्णन: उहाँको वर्ण पहेँलो रंगको छ र उहाँले आफ्नो हातमा बहुमुल्य मुकुट शिखरको साथ बिजयी ध्वजा बोक्नुहुन्छ । उहाँलाई संवेदी शक्तिको शिखर भनेर पनि जानिन्छ, जसले उहाँको यथार्थ जान्ने आदिम जागरुकतालाई जनाउँछ । यो सिधै शुन्यता बुझ्ने उच्चतम विवेक हो र त्यसकारण यसलाई शिखरमा राखिन्छ । ‘विजयी ध्वजा’ले चक्रिय अस्तित्वमाथिको विजयलाई जनाउँछ र ‘राजा’ले उहाँको प्रबुद्ध प्रकृतिलाई जनाउँछ । ‘स्पष्ट इन्द्रिय’ भनिने संसारमा उहाँ दृढताका साथ उत्तरी क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: ईर्ष्याबाट गरिने कार्यबाट हुने नकारात्मक कर्मको शुद्धिकरण
३०. तथागत, गौरवशाली पूर्ण अधिनकर्ता (सुविक्रन्ता श्री)
तिब्बती: ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གནོན་པའི་དཔལ། (शिन्तु नाम्पार नोन्पे पेल)
वर्णन: उहाँको वर्ण सेतो रंगको छ र उहाँको एक हात बुद्ध शाक्यमुनि जस्तै भुमी छुने मुद्रामा हुन्छ । उहाँ सबै मनो-व्यथा र विद्रोही शक्तिका ‘अधिनकर्ता’ हुनुहुन्छ । ‘सुखभोग’ भनिने संसारमा उहाँ दृढताको साथ उत्तर-पूर्वी क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: अरुलाई नराम्रो कार्य गर्न आदेश दिनाले हुने नकारात्मक कर्मको शुद्धिकरण
३१. तथागत, युद्धमा महान् विजेता (युद्ध जय)
तिब्बती: གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ། (युल ले नाम्पार ग्याल्वा)
वर्णन: उहाँको वर्ण कालो रंगको छ र उहाँका हातहरुले तरवार र ढाल समाइरहेको हुन्छन् । उहाँलाई ‘युद्धमा महान् विजेता’ भनेर चिनिन्छ किनकि उहाँले चेतनशील प्राणीको दुखदायी भावना र नकारात्मक कार्यजस्ता भित्री शत्रुलाई पराजित गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँले चक्रिय अस्तित्वमाथी विजय हाँसिल गर्नभएको छ र त्यसकारण उहाँले सबै चेतनशील प्राणीहरुलाई मुक्तिमा डोर्याउन सक्नुहुन्छ । ‘बिना भ्रम’ भनिने संसारमा उहाँ दृढताको साथ तल बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: घमण्डको कारण गरिने कार्यबाट हुने नकरात्मक कर्मको शुद्धिकरण
३२. तथागत, पार गरेका गौरवशाली परम पूर्ण अधिनकर्ता (विक्रन्तागामी श्री)
तिब्बती: རྣམ་པར་གནོན་པའི་གཤེགས་པའི་དཔལ། (नाम्पार नोन्पे शेग्पे पेल)
वर्णन: उहाँको वर्ण सेतो रंगको छ र उहाँको हात भुमी छुने र निडरता प्रदान गर्ने मुद्रामा हुन्छ । उहाँलाई अधिनकर्ता भनेर पनि चिनिन्छ जसले मनो-व्यथा र दुषित कार्यहरुजस्ता भित्री शत्रुहरुलाई पराजित गर्नुहुन्छ । यसैगरी उहाँलाई चेतनशील प्राणीहरुलाई पूर्ण उत्कृष्टतामा लान सक्ने क्षमता भएको कारण ‘गौरवशाली’ भनिन्छ । ‘गौरवबाट सम्पन्न’ भनिने संसारमा उहाँ बुद्ध शाक्यमुनिको पूर्वी क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: निन्दा गरेर हुने नकारात्मक कर्मको शुद्धिकरण
३३. तथागत, सबैलाई उज्यालो दिने गौरवशाली शृंखला (सामन्तवाभाषास व्युहा श्री)
तिब्बती: ཀུན་ནས་སྣང་བ་བཀོད་པའི་དཔལ། (कुन्ने नान्ग्वा कोपे पेल)
वर्णन: उहाँको वर्ण पहेँलो रंगको छ र उहाँले सुर्य र बहुमुल्य रत्नको डाँठ समात्नुहुन्छ । उहाँको नाममा रहेको ‘सबैलाई उज्यालो दिने’ले उहाँको सबै चेतनशील प्राणीहरुको अज्ञानता हटाउने आदिम जागरुकतालाई जनाउँछ । चेतनशील प्राणीहरुलाई पूर्ण उत्कृष्टतामा लैजान सक्ने उहाँको क्षमताको कारण उहाँलाई ‘गौरवशाली’ भनिन्छ । ‘प्रकाशबाट सम्पन्न’ भनिने संसारमा उहाँ दृढताको साथ दक्षिणी क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: दानवीय कार्यमा आनन्द लिएको कारण हुने नकारात्मक कर्मको शुद्धिकरण
३४. तथागत, रत्न कमल महान् अधिनकर्ता (रत्न पद्म)
तिब्बती: རིན་ཆེན་པདྨའི་རྣམ་པར་གནོན་པ། (रिन्चेन पद्मे नाम्पार नोन्पा)
वर्णन: उहाँको वर्ण रातो रंगको छ र उहाँले आफ्नो हातमा रत्न र कमल बोक्नुहुन्छ । ‘रत्न’ले उहाँको पूर्ण प्रबुद्ध प्राणीहरुको उत्कृष्ट गुणहरुलाई दर्शाउँछ । कमलले उहाँको मनको दागरहित प्रकृतिलाई जनाउँछ । उहाँ चेतनशील प्राणीहरुको दुखदायी भावना र नकरात्मक कार्यहरुको महान् अधिनकर्ता हुनुहुन्छ । ‘गौरवशाली’ भनिने संसारमा उहाँ दृढताका साथ पश्चिमी दिशामा बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: धर्म छोडेको कारण हुने भारी नकारात्मक कर्मको शुद्धिकरण
३५. तथागत, मेरु पर्वतका राजा (शैलेन्द्र राजा)
तिब्बती: དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་དང་པདྨ་ལ་རབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་རི་དབང་གི་རྒྱལ་པོ། (डेझीन शेग्पा द्राचोम्पा यांगदाग्पार जोग्पे साङ्गे रिन्पोछे दांग पद्म-ला रब्तु झुग्पे रिवांग गि ग्याल्पो)
वर्णन: उहाँको वर्ण आकाशे निलो रंगको छ र उहाँका हातहरुले मेरु पर्वतलाई अड्याइरहेका छन् । उहाँ कमल, चन्द्रमा, सिंह र बहुमुल्य रत्नहरुले अलंकृत गद्दीमा बस्नुहुन्छ । ‘रत्न र कमल’ले उहाँको र अन्य बुद्धहरुको गद्दीलाई जनाउँछ । रत्नले उहाँको आदिम जागरुकता र जागृत प्राणीहरुको उत्कृष्ट गुणलाई पनि जनाउँछ । उहाँको नाममा भएको ‘मेरू पर्वत’ले उहाँको हिमालहरुका राजाजस्तै अटल गुणलाई जनाउँछ । ‘बहुमुल्य रत्न’ भनिने संसारमा उहाँ उत्तरी क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ ।
शुद्धिकरण: प्रतिबद्धता तोडेर हुने नकारात्मक कर्मको शुद्धिकरण
महामहिम २५औं छेम रिन्पोछेद्वारा २३ अक्टोबर २०१८ मा संकलित
पिडिएफ भर्सन यहाँ डाउनलोड गर्नुहोस्
शरण लिने र बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने
नमो गुरु बेह
नमो बुद्ध या
नमो धर्म या
नमो संघ या (३ पटक पाठ गर्नुस्)
म गुरुमा शरण लिन्छु
म बुद्धमा शरण लिन्छु
म धर्ममा शरण लिन्छु
म संघमा शरण लिन्छु (३ पटक पाठ गर्नुस्)
बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने
सांग ग्ये चो दांग छोग क्यी चोग नाम ला
जांग चुब बार डु दाग नि क्याब सु ची
दाग गि जिन सोक ग्यी पे सो नाम क्यी
ड्रो ला पान चीर सांग ग्ये द्रुब पार शोग (३ पटक पाठ गर्नुस्)
म तबसम्म शरण लिन्छु जबसम्म म बुद्ध, धर्म र संघहरुमा प्रबुद्ध बन्दिन । दानी चरित्र अभ्यास गरि मैले उत्पन्न गरेको सकारात्मक क्षमताबाट र अन्य दुरदर्शी चरित्रबाट सबै चेतनशील प्राणीहरुको लाभको लागि मैले बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकूँ । (३ पटक पाठ गर्नुस्)
चार असिमितहरु (चार ब्रह्मविहारा)
सेम चेन ताम चे दे वा दांग दे वे ग्यू दांग देन पार ग्युर चिग
सेम चेन ताम चे दुग ङेल दांग दुग ङेल क्यी ग्यू दांग द्रेल वार ग्युर चिग
सेम चेन ताम चे दुग ङेल मे पे दे वा दांग मि द्रेल वार ग्युर चिग
सेम चेन ताम चे न्ये रिंग चाग दांग न्यी दांग द्रेल वे दांग न्योम ला ने पार ग्युर चिग (३ पटक पाठ गर्नुस्)
सबै चेतनशील प्राणीहरुसँग सुख र यसका कारकहरु होस्,
सबै चेतनशील प्राणीहरु दुख र यसका कारकहरुबाट मुक्त होउन्,
सबै चेतनशील प्राणीहरु दुखबिनाको आनन्दको अनुभूतिबाट कहिल्यै अलग नहुन् ।
सबै प्राणीहरु समभावको अवस्थामा होउन् र पूर्वाग्रह, लगाव र रिसबाट मुक्त होउन् । (३ पटक पाठ गर्नुहोस्)
मन रुपान्तरणको आठ श्लोकहरु
घेशे लान्ग्री तांगपाबाट
प्रबुद्धता प्राप्त गर्ने विचारसहित
सबै प्राणीहरुको हितको लागि,
जो इच्छा पुरा गर्ने रत्नभन्दा बढी बहुमुल्य छन्,
म निरन्तर यसलाई आफ्नो मानि साधना गर्नेछु ।
जब म अरुसँग हुन्छु,
म आफुलाई सबैभन्दा तल्लो ठानी साधना गर्नेछु,
र मेरो मनको भित्री गहिराईदेखि
म अरुहरुलाई सम्मानपूर्वक सर्वाच्च मान्नेछु ।
सबै कार्यहरुमा म आफ्नो मनलाई जाँच्नेछु
र जुन पल भयानक विचार आउँछ,
जसले मलाई र अरुलाई खतरामा पर्छ,
म डटेर प्रतिवाद गर्नेछु र त्यसलाई पन्छ्याउनेछु ।
जब म खराब प्रकृतिको मानिसलाई भेट्छु,
जो नकारात्मक उर्जा र अत्यधिक दुखबाट भावविभोर छन्,
म यस्तो दुर्लभ मानिसलाई आफ्नो गरि राख्नेछु
आफुले बहुमुल्य खजाना पाएझैँ ।
जब कसैले इर्ष्याको कारण,
मलाई गालि गरेर दुर्व्यवहार गर्नेछन्,
म आफ्नो हार स्वीकार गरि साधना गर्नेछु
र उनीहरुलाई जित टक्राउनेछु ।
जब कोहि, जसलाई मैले लाभ पुर्याएको छु र जसमा
मैले ठुली विश्वास गरेको छु, उसले मलाई धेरै नराम्रोसँग धोका दिन्छ,
म त्यस व्यक्तिलाई आफ्नो सर्वाच्च गुरु मानी
साधना गर्नेछु ।
छोटकरीमा, म प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा
हरेक लाभ र खुशी सबै प्राणीहरु, मेरा आमाहरुलाई अर्पण गर्नेछु ।
म गोप्य रुपमा साधना गर्नेछु र उहाँहरुको
सबै हानिकारक कार्य र दुखहरु आफुमा लिनेछु ।
यी साधनाहरुमा आठ संसारिक
चिन्ताहरुको दाग नलागिकन,
सबै घटनाहरुलाई मायावी ठानी
म प्रलोभित नभई सबै प्राणीहरुलाई विचलित गर्ने
अधिनस्त मन र कर्मको दासताबाट मुक्ति दिन साधना गर्नेछु ।
तीन श्रेष्ठको महायान सुत्र
बोधिसत्त्वको नैतिक पतनको कबुलप्रति श्रद्धा अर्पण । म, जसको नाम [यहाँ तपाईंको नाम लिनुहोस्] हो, सधैँ गुरुकोमा शरण लिन जान्छु, बुद्धकोमा शरण लिन जान्छु, धर्ममा शरण लिन जान्छु, संघमा शरण लिन जान्छु ।
अक्षोभयाको वज्र परिवार (निलो रंगमा)
गुरु, आशिष प्राप्त, तथागत, शत्रु नाशक, पूर्ण रुपमा उत्कृष्ट बुद्ध, गौरवशाली विजेता शाक्यमुनिलाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, वज्रको सार भएका पूर्ण अधिनकर्तालाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, उज्यालो प्रकाशका रत्नलाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, नागहरुको शक्तिशाली राजालाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, नायकहरुका नेतालाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, गौरवशाली आनन्दलाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, रत्नअग्नि लाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
वैरोचनाको तथागत परिवार (सेतो रंगमा)
तथागत, रत्न चन्द्रप्रभालाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, हेर्नको लागि अर्थपूर्णलाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, रत्न चन्द्रमालाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, परम बेदागलाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, महिमाद्वारा सम्मानितलाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, परम शुद्धलाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, शुद्धताको साथ रुपान्तरणलाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
रत्नसम्भवका रत्न परिवार (पहेँलो रंगमा)
तथागत, जल देवतालाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, जलदेवताका भगवानलाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, गौरवशाली उत्कृष्टतालाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, गौरवशाली चन्दनलाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, अनन्त वैभवलाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, गौरवशाली प्रकाशलाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, दुखबिना गौरवशालीलाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
अमिताभका कमल परिवार (रातो रंगमा)
तथागत, लालचबिनाको छोरालाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, गौरवशाली फुललाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, शुद्ध प्रकाशको आनन्द लिएर स्पष्ट रुपमा बुझ्नेलाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, कमलको प्रकाशको आनन्द लिएर स्पष्ट रुपमा बुझ्नेलाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, गौरवशाली धनलाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, गौरवशाली विचारशिलतालाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, महान् यशको गौरवशाली नामलाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
अमोघासिद्धिको कर्म परिवार (हरियो रंगमा)
तथागत, शक्तिशालीहरुका प्रमुख विजयी ध्वजाका राजालाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, गौरवशाली परम पूर्ण अधिनकर्तालाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, युद्धमा महान् विजेतालाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, पार गरेका गौरवशाली परम पूर्ण अधिनकर्तालाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, सबैलाई उज्यालो दिने गौरवशाली शृंखलालाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, रत्न कमल महान् अधिनकर्तालाई, म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
तथागत, शत्रु नाशक, पूर्ण रुपमा उत्कृष्ट बुद्ध, रत्न र कमलमा विराजमान मेरु पर्वतका राजालाई म साष्टांग प्रणाम गर्छु ।
हे सबै तथागतहरु र अन्य सबै जतिपनि तथागतहरु, शत्रु नाशक, पूर्ण रुपमा उत्कृष्ट बुद्धहरू, आशीर्वाद प्राप्तहरु यस लोकको दश दिशामा वास गर्नुहुन्छ, कृपया मलाई सुनिदिनुहोस् ।
यस जीवन र अनन्तकालदेखिका मेरो सबै जीवनहरुमा, जीवनचक्रमा भौतारिँदा मेरो सबै पुनर्जन्मको स्थानहरुमा मैले नराम्रो कार्यहरु गरेको छु, नराम्रो कार्यहरु गर्न आदेश दिएको छु र त्यसको आनन्द लिएको छु । मैले अर्पणको आधारको सम्पत्ति, संघको सम्पत्ति, दश दिशाका संघहरुको सम्पत्ति चोरेको छु, चोर्न आदेश दिएको छु र ती चोरिँदा आनन्द लिएको छु । मैले पाँच अतिनै घृणित कार्यहरु गरेको छु, ती कार्यहरु गर्न आदेश दिएको छु र ती कार्यहरु गरिँदा आनन्द लिएको छु । म पूर्ण रुपमा दश गैर-नैतिक कार्यहरुमा संलग्न भएको छु, ती कार्यहरुमा अरुलाई संग्लन हुन आदेश दिएको छु, र ती कार्यहरुमा उनीहरु संलग्न हुँदा आनन्द लिएको छु ।
ती कर्मका बाधाहरुबाट छेकिएर म नर्कको प्राणी हुनेछु वा म एक जनावरको रुपमा जन्म लिनेछु, वा म भोको भुतहरुको ठाउँमा जानेछु वा मैले एक अधार्मिक देशमा हिंस्रक मान्छेको रुपमा जन्म लिनुपर्नेछ वा मैले लामो आयु देवताको रुपमा जन्मिनुपर्नेछ वा मैले अपूर्ण चेतना पाउनेछु वा मैले गलत विचार पाउनेछु वा मैले बुद्धलाई प्रसन्न पार्ने मौका पाउने छैन ।
म बुद्धहरु, जो परम आशिषप्राप्त हुनुहुन्छ, जो बैध भैसक्नुभएको छ र जसले आफ्नो विवेकबाट हेर्नुहुन्छ, उहाँहरुको उपस्थितिमा ती सबै कर्मका बाधाहरु घोषणा गर्दछु । म केहि पनि ढाकछोप नगरी स्वीकार गर्छु र अबदेखि ती कार्यहरु गर्नबाट बच्छु वा जोगिन्छु ।
सबै बुद्धहरु, परम आशिषप्राप्त, कृपया मलाई सुनिदिनुहोस् ।
यस जीवन र अनन्तकालदेखिका मेरो सबै जीवनहरुमा, जीवनचक्रमा घुमिरहँदा मेरो सबै पुनर्जन्मको स्थानहरुमा मैले अरुलाई केहि दिनुमा जे नैतिकताको मूल छ, चाहे त्यो एक मुठी खाना जनावरको रुपमा जन्म लिएकोलाई दिँदा नै किन नहोस्;
मेरो नैतिक अनुशासन पालनमा जे नैतिकताको मूल छ;
महान् मुक्तिको लागि मेरो अनुकुल कार्यहरुमा जे नैतिकताको मूल छ;
चेतनशील प्राणीहरुलाई पूर्ण बनाउन मेरो कार्यहरुमा जे नैतिकताको मूल छ;
मैले प्रबुद्धताको सर्वाच्च मन उत्पन्न गर्नुमा जे नैतिकताको मूल छ;
र मेरो अपार उच्च विवेक हुनुमा जे नैतिकताको मूल छ; यी सबै भेला, जम्मा भएका र संकलन गरिएकाहरुलाई अपारप्रति पूर्ण समर्पण गर्दै, जसभन्दा माथि केहि छैन, जुन उच्चभन्दा पनि उच्च छ, म पूर्ण रुपमा अपार, उत्कृष्ट र पूर्ण प्रबुद्धतालाई समर्पण गर्छु ।
अतितका आशिष प्राप्त बुद्धहरुले पूर्ण रुपमा समर्पण गरेजस्तै, आउन बाँकी आशिष प्राप्त बुद्धहरुले समर्पण गर्नेजस्तै र अहिले बाँचिरहेका आशिष प्राप्त बुद्धहरुले जस्तै म पनि पूर्ण रुपमा समर्पण गर्दछु ।
म व्यक्तिगत रुपमा सबै नकारात्मक कार्यहरुको कबुल गर्दछु । म सद्गुणहरुमा आनन्द लिन्छु । म सबै बुद्धहरूलाई बिन्ती र अनुरोध गर्छु ।
मैले पवित्र, सर्वाच्च, अपार उच्च विवेक प्राप्त गर्न सकूँ ।
जति पनि विजेताहरु, बाँचिरहनुभएका सर्वाच्च हस्तिहरु, विगतका हस्तीहरु र त्यसैगरी आउन बाँकी ती हस्तिहरु, तपाईंहरुको राम्रो गुणहरुको सीमाहीन महासागरको प्रशंसाको साथ म मेरो हात जोड्दै म शरणको लागि तपाईंको नजिक जान्छु ।
महायान सुत्र “तीन श्रेष्ठहरुको सुत्र” यहाँ समापन हुन्छ ।
जंग-जुब सेम-चोक रिन्पोछे
मा-क्ये पा-नाम क्ये-ग्युर चिक
क्ये-पा न्याम-पा मे-पा यांग
गोंग-ना गोंग-डु पेल-वार शुग
बहुमुल्य सर्वाच्च बोधि-चित्त,
यो जहाँ जन्मदैन, त्यहाँ उदाओस् ,
र जहाँ जन्मन्छ कहिल्यै कमी नहोस्,
तर अझै सधै बृद्धि होओस् !
तोंग-नि तोंग-वा रिन्पोछे
दाग-सोग जिन-न्येह साग-पा गे-वा दी
तान-दांग ड्रो-वा कुन-ला गांग-फान दांग
चे-पार जे-सुन लो-जांग द्राग-पा यी
तान-पि न्यिंग-पो रिंग-डु साल-शेह शुग
मैले यहाँ जतिपनि सदगुणहरु एकत्रित गरे, त्यसले सबै प्राणी र बुद्ध धर्मलाई लाभ दियोस् र यसले विशेषगरी महान् गुरु चोंखापाको महत्वपूर्ण शिक्षाहरु स्पष्ट र स्थायी होओस् ।
जे चोंखापाको प्रार्थना
क्ये-वा कुन-तु यांग-डाक ला-मा दांग
द्राल-मे छो-क्यी पाल-ला लोंग-छो चिंग
सा-दांग लाम-ग्यी योन-टेन राप-जोक ना
दोर्जे चांग-गि गो-पांग न्यूर-तो शुग
मेरो सबै पुर्नजन्ममा म उत्कृष्ट गुरुहरुबाट छुट्टिन नपरोस्,
धर्मको व्याप्तताको मैले आनन्द लिन पाऊँ!
गुण चरण र मार्गहरुमा उत्कृष्ट हुँदै
मैले चाँडै वज्रधारा बुद्धको अहोदा प्राप्त गर्न सकूँ ।
गे-वा दि-यी न्यूर-डु डाक
ला-मा सांग-ग्ये द्रुप-ग्युर ना
ड्रो-वा चिक-क्यांग मा-लु पा
दे-यी सा-ला गो-पार शुग
यस सद्गुणको माध्यमबाट मलाई सहज रुपमा तत्काल
गुरु बुद्धत्वको प्राप्त होस्,
र प्रत्येक चेतनशील प्राणीलाई,
प्रबुद्धताको स्थितिमा लगोस् !
चो खी ग्याल पो चोंग खा पा
चो सुल नाम पार फेल वा ला
गेक कि शान मा झी वा दांग
थुन क्यिन मा लु शांग वार शोक
सबै अनुकुल अवस्थाहरु उदाउन्
र सबै बाधाहरु नियन्त्रित होउन्
धर्म राजा, चोंखापाको सिद्धान्त
अनन्त रुपले बृद्धि हुनका लागि !
दा दांग शेन गी डु सुम दांग
ड्रिल वा त्सोक न्यी ला टेन ने
ग्या वा लो जांग द्राग पा यी
तान पार युन रिंग वार ग्युर चिग
तीन पटक मेरो र अरुको सद्गुणबाट,
लामा चोंखापाको सिद्धान्त सदाको लागि उज्यालो भई बलिराखोस् !
न्यिमो देले छेन तेले
न्यिमे गुंग यांग देले शिन
न्यित्सेन ताक्तु देले पेल
कोन चोक सुम ग्यी जिन ग्यी लोब
कोन चोक सुम ग्यी न्गोर ड्रुल सोल
कोन चोक सुम ग्यी त्रा शि शोक
विहान र साँझ, राति वा मध्यदिनमा,
तीन रत्नले हामीलाई आशीर्वाद दिउन्,
सबै अनुभूति प्राप्त गर्न उनीहरुले मद्दत गरुन्
र उनीहरुले विभिन्न शुभ संकेतहरु हाम्रो जीवनको मार्गमा छरून् ।।
गुरुको लामो आयूको लागि समर्पण
जेत्सुन लामा कु से राब्तेन चिंग
नामकार त्रिन्ले चोग चुर ग्ये पा दांग
लोब्सांग तेंपे द्रोन मे सा सुम ग्यी
ड्रो वे मुन्सेल ताक्तुर ने ग्युर चिग
पवित्र गुरुहरुको लामो आयु होस् ।
प्रबुद्ध कार्यहरु दश दिशामा पूर्ण रुपमा फैलियोस्,
र लामा चोंखापाको शिक्षाको ज्योतिले
तीन लोकका प्राणीहरुलाई छेक्ने अँध्यारो निरन्तर हटाओस् ।
पवित्र १४औं दलाई लामाको लामो आयुको लागि समर्पण
गांग रि रावे कोर्वाई शिंग खाम दिर
पेन दांग देवा मालु ग्युंग वाई ने
चेनरेजिग वांग तेन्जिन ग्यात्सो यी
शा पेइ सिथाई बार्दु देन ग्युर चिग
हिउँ भएको हिमालहरुले घेरिएको यस पवित्र भुमिमा,
तपाईं सबै लाभ र खुशीको श्रोत हुनुहुन्छ
तपाईंको कमल चरण, हे शक्तिशाली चेनरेजिग, तेन्जिन ग्यात्सो
यस धर्तीको अस्तित्व भएसम्म यस धर्तीमा रहिरहोस् ।
लुद्रुब (नागार्जुन) चित्रण प्रणाली अनुसार महायान बौद्ध कबुल सुत्रबाट शाक्यमुनि र ३५ कबुल बुद्धहरु । तस्विर श्रोत: himalayanart.org
नागार्जुन चित्रण प्रणालीमा बनाइएको शाक्यमुनि बुद्ध र ३५ कबुल बुद्धहरुको पुरानो थान्का । तस्विर श्रोत: himalayanart.org
शाक्यमुनि बुद्ध आफ्ना दुई मुख्य विधार्थीहरु, शरीपुत्र र मौदगल्यायनसँग, ३५ कबुल बुद्धहरुको माझ । तस्विर: himalayanart.org
बुर्यात ऐतिहासिक संग्रहालयमा केन्द्रिय आकृति शाक्यमुनि बुद्ध भएको ३५ कबुल बुद्धहरुको चित्र । तस्विर श्रोत: himalayanart.org
शाक्यमुनि बुद्धको साथ ३५ कबुल बुद्धहरु । तस्विर श्रोत: himalayanart.org
केन्द्रिय आकृतिमा शाक्यमुनि बुद्धका साथ ३५ कबुल बुद्धहरुको न्यिंग्मा चित्र । तस्विर श्रोत: himalayanart.org
तिब्बतबाट शाक्यमुनि बुद्धको साथ ३५ कबुल बुद्धहरुको पुरानो थान्का । तस्विर श्रोत: himalayanart.org
३५ कबुल बुद्धहरु र बुद्ध शाक्यमुनिको विस्तृत चित्रण । तस्विर श्रोत: buddhaweekly.com
३५ कबुल बुद्धहरु । तस्विर श्रोत: exoticindiaart.com
शाक्यमुनि बुद्धका साथ ३५ कबुल बुद्धहरु । तस्विर श्रोत: himalayanart.org
शाक्यमुनि बुद्धका साथ ३५ कबुल बुद्धहरु । तस्विर श्रोत: gildingartsstudio.com
३५ कबुल बुद्धहरुको चिनियाँ शैलीको चित्र ।
थप विस्तृत जानकारीका लागि:
दोर्जे शुग्देनको उदाहरणीय कथाहरु र सजीब उपन्यास
दोर्जे शुग्देन : हाम्रा व्यक्तिगत कथाहरू
कसरी तिब्बती नेतृत्वले प्रायोजकलाई व्यवहार गर्दछन् (जिन्दक)
ट्रोडेखाङसार –४०० बर्ष पुरानो दोर्जे शुग्देनको पुजाघर, ल्हासामा
ईश्वरीयता (ईश्वर) लाई पुकार्नु
मित्रले नेपालीमा भगवान दोर्जे शुग्देनका बारेमा सिकाउनुहुन्छ ।
Tags: Buddhism, dorje shugden, kechara forest retreat, nepali, practice
Stephen Hawking uses latest computer graphics to bring aliens to life »
Popular From नेपाली
Lama Tsongkhapa arrives at Jan’s lovely Home!!!
Tsongkhapa & Friends atadisco???
Something easy to do daily yet powerful…
Wesak Day The World Over
नेपालको काठमाडौँमा दोर्जे शुग्देनको अद्भुत भित्तेचित्र!
पवित्र दलाई लामालाई खुल्लापत्र (अप्रिल ३०, २०१८)
More articles from Buddhas, Dharma & Practice / नेपाली
दोर्जे शुग्देनका चमत्कारहरू
Kalarupa (Bahasa Indonesia)
के हामी सबैले दलाई लामाका कुरा सुन्न अनिवार्य छ ?
ठुलो र धेरै बुद्धका मूर्तिहरुले फरक पार्छ
१०,००० मंगोलियनहरूले दोर्जे शुग्देनलाई स्वागत गर्छन्!
Jacinta Goh on My Beautiful Vajra Yogini Statue
United States 6,177,631
United Kingdom 834,075
United Arab Emirates 117,941
South Africa 115,358
Sri Lanka 112,661
Hong Kong 103,986
New Zealand 86,498
Myanmar (Burma) 82,374
South Korea 70,428
I Thank You very much indeed, Rinpoche, it has beenapriviledge talking with you and I do very much appreciate it. Please keep strong, healthy, and may all your ... Read More
Your open en direct way of communication is appealing to many (non) Asians. This is your personal style and it is only natural that it influences your communication and perhaps ... Read More